ယောကျြားနဲ့ဝေးနခြေိနျ – My Blog
“ကိုညီ..မလုပျနဲ့တော့…တဈယောကျယောကျတှသှေ့ားလိမျ့မယျ” “ခနလေးပါ မီမှနျရယျ” ကိုညီနောကျကနေ… ခပျသှကျသှကျလေး လုပျပွီးတော့…တငျပါးပျေါကို..လရညျတှတေငျပေးလိုကျတယျ။ “ကိုကွီး…သုတျပေးဦး” “အေးအေး” ကိုညီလဲမွနျမွနျသုတျပွီး တော့…ညီတျောမောငျကိုပါ…မွနျမွနျသနျ့ရှငျးရေးလုပျပွီးတော့… တံခါးကိုဟပွီး..ခြောငျးကွညျ့လိုကျတယျ။ဘယျဝနျထမျးမှကျော ရဈတာမှာ..မရှိတာသခြောမှTrayကိုယူပွီးထှကျလာလိုကျတယျ။ ဖွဈပုံကတော့ဒီလိုလေ….ရနျကုနျမွို့ရဲ့နာမညျသိပျမကွီးတဲ့..အတှဲ တှလေညျးလာပုံမှနျလာတတျတဲ့…Hotelအလတျစားတဈခုမှာပေါ့။ Waiterလုပျနတေဲ့ကိုညီဆိုတဲ့ကောငျလေးနဲ့…မီမှနျစိုးဆို တဲ့Housekeepingကောငျမလေးတို့….Checkoutလုပျသှားတဲ့အခနျးထဲမှာ… တဈယောကျကလဲအခနျးရှငျးဖို့လာရငျး…ပနျးကနျ တှသေိမျးဖို့လှမျးချေါရာကနေ…လူလဈတုနျးအလုပျဖွဈနတောပါ။
အခြိနျကလညျးနခေ့ငျးဆိုတော့…လူလညျးရှငျးပွီးတော့…အလုပျလုပျရတာကလညျး…ကိုယျ့အလှာနဲ့ကိုယျဆိုတော့… ဘယျသူမှမ သိလိုကျပဲ…အဆငျပွသှေားတာပေါ့။မီမှနျမှတျမှတျရရပွောရရငျတော့…ပွီးခဲ့တဲ့နှဈပါတျလောကျက… အပွငျမှာ..ကိုညီ့ကိုအဖွေ ပေးပွီးတော့…သိပျမကွာဘူး..အခဈြခံရတော့တာပဲ။ ဟိုတယျမှာလုပျရတယျဆိုတော့… တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ…ဂြူတီတှကေ လဲမတူကွဘူးလေ။ဒါပမေယျ့…အခုနောကျပိုငျးကတြော့…နညျးပညာကလဲအကုနျလုံးလိုလို… အသုံးပွူနိုငျပွီဆိုတော့…ညဖကျကို ညီနိုကျဂြူတီကတြာတို့ဆိုလညျး…vdo..callပဲချေါမလား..chatမလား… ကွိုကျတာလုပျလို့ရတယျလေ။ အဖွမေပေးခငျ ကတညျးက…လုပျဖျေါကိုငျဖကျဘဝထဲမှာလညျး…
ကိုညီကရောကျနတောလဲကွာပွီ။အသကျကလဲ…မီမှနျထကျပိုကွီးတော့…အစစအရာရာကူညီပေးရငျးနဲ့…ရငျးနှီးခဲ့ကွတာပါ… Departmentမတူတော့လညျး..ပိုပွီးကောငျးပါတယျ… တူနရေငျ ကွိုကျဖွဈခငျြမှ ကွိုကျဖွဈမှာပါ ဒီလိုနဲ့အိမျပွနျခြိနျရောကျလာ တော့… ယူနီဖေါငျးလဲပွီး..အောကျကိုဆငျးလာခဲ့တယျ။ကားဂိတျမှာအသငျ့စောငျ့နတေဲ့….ဝမေငျးကိုတှတေ့ော့ပွုံးပွလိုကျတယျ။ သူကTaxiမောငျး တော့… အိမျအပွနျမပူရဘူးလေ။နတေို့ငျးတော့မဟုတျပမေယျ့….တဈပါတျကို…လေးငါးရကျလောကျကွိုတော့… အဆငျပွတောပေါ့ ။
ပွီးတော့…အိမျကအမကေတော့..သူ့ကိုသဘောကတြယျ။မီမှနျလဲအရမျးခဈြတယျ… ပထမဆုံးခဈြသူမို့လေ။သူနဲ့ပဲအရာအားလုံးကို သိခှငျ့ရခဲ့တာလေ။ဟိုဖကျရပျကှကျဒီဖကျရပျကှကျဖွဈပမေယျ့….ငယျငယျလေးထဲကအရမျးသဘောကခြဲ့ရတဲ့အကိုတဈယောကျဆို လဲဟုတျတယျ။သူကဟိုဖကျရပျကှကျ ကဆိုပမေယျ့….ကိုယျ့ဖကျရပျကှကျမှာပဲ… ဂိမျးလာလာဆော့နတေတျတာ။ “မောနပွေီလား သဲလေး” “မမောပါဘူး..ဒီနနေ့လေ့ညျလောကျကတညျးက…အခနျးတှေ ရှငျးပွီးသှားတာ” “သွျော…. ကောငျးတာပေါ့…ဘယျသှားမ လဲ…” “ဘယျသှားခငျြလို့လဲ” “မေးကွညျ့တာပါ….ကားမဆှဲတော့ဘူးလေ….နလေ့ညျက ပှိုငျ့တဈခုက ရလာသေးတယျ” “အငျးဒါပေ မယျ့.ခွောကျနာရီလောကျတော့အိမျပွနျမယျနျော” “အိုကေ”
မီမှနျအလုပျလုပျတဲ့ဟိုတယျက…ရှဂေုံတိုငျဖကျကဆိုတော့…နီးနီးနားနားဖွဈအောငျ…အငျးယားလမျးက ဟိုတယျတဈခုပဲ မောငျး လာလိုကျတယျ။အဲဒီ့မှာက….တဈဆကျရှငျတဈသောငျးခှဲဆိုတော့..အိုကပေဲ။အခနျးထဲရောကျတော့…ရခြေိုးခနျးထဲဝငျပွီး… အဝတျ ခြှတျကာတာဝါတဈထညျပတျထားလိုကျတယျ။ ဒီကိုလာနကေဆြိုတော့…အေးဆေးပါပဲ….သူမြားအတှဲတှလေိုလဲဝငျတာနဲ့… နမျး ဖကျနရေအောငျလဲ…အငမျးမရမဟုတျတော့အေးဆေးပါပဲ။တဈခုတော့ရှိတယျ…မီမှနျ့ရဲ့ညီမလေးကိုတော့… ရမေဆေးထားဘူး။ဒါ ကတော့…နောကျဆိုဘာလဲ သိရမှာပေါ့နျော…ခနတော့စောငျ့။ညီမလေးကိုငုံ့ကွညျ့လိုကျတော့… အမှေးလေးတှတေောငျ… ထိုးထိုးထောငျထောငျငုတျစိလေးတှတေောငျဖွဈနပွေီ….
ကုတငျပျေါရောကျတော့…တီဗီဖကျမှာ..ဝလေငျးကPen.Driveတဈခြောငျးနဲ့တီဗီမှာအလုပျရှုပျနတေယျ။ဒီနသေူ့ဖုနျးနဲ့ ဒေါငျးထား တာတှကေိုပွမလို့နမှော။(Ps: Pen Drive က Opticalနျော…ဆရာကွီးမဟုတျတဲ့လူတှအေတှကျရှငျးပွတာပါ) တီဗီမှာပျေါလာတာ ကHomemadeလေ..အလငျးရောငျက HDမဟုတျဘူး။သူကProမဟုတျတဲ့လူတှေ…သရုပျဆောငျတာတှပေဲ… သဘောကတြာ လေ။သူ့ဖုနျးထဲမှာလဲအပွညျ့ပဲ။ ဝလေငျးဒီဖကျလှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့…အိခြောပိုလိုမြိုး ဘောဒီလိုပုံမြိုးလေးနဲ့… ကုတငျကို ခွဆေငျးထိုငျပွီး…တီဗီဖကျကိုကွညျ့နတေဲ့…မီမှနျ့ကိုတှလေို့ကျတော့…
စိတျထဲကတော့ပွောလိုကျတယျ။ကိုယျ့ကိုကိုယျအရမျးကံကောငျးတဲ့လူလို့။ခငျဗြားတို့ပဲစဉျးစားကွညျ့လေ… အသကျက၁၉နှဈ ကြျောကြျော..ရုပျကလဲကွညျ့ကောငျးတဲ့ဖကျပါတယျ။ နှဈခမျးထူလေးကနှာဗူးနုတျခမျးလေ….ပွီးတော့ဘျောဒီကလဲ..နောကျက ကွညျ့ရငျ၂၅လောကျတော့… ခနျ့မှနျးလို့ရအောငျကွညျ့ကောငျးတယျ။နို့တှကေတော့… လကျတဈကိုငျစာလောကျရှိတယျ။တငျပါး တဈခုထဲကားကားလေးနဲ့တငျးတငျးရငျးရငျးလေး…အရမျးမိုကျတာ… လေးဖကျလေးမြားကုနျးပေးလိုကျလို့ကတော့…လုံးဝကိုမိုကျ တာ။
ပွီးတော့ကြှနျတျောထပျကံကောငျးတာက…သူ့ရဲ့အပြိုစငျပနျးလေးကို…ကြှနျတျောအရငျရခဲ့တာရယျ။လိငျကိစ်စတှနေဲ့ပကျသကျလာ ရငျ… ကြှနျတျောဘာပွောပွော…ဘာပဲတောငျးဆိုဆို…ဖွဈအောငျလုပျပေးတတျတာပဲ။သူကမပါစိတျပါလကျပါနဲ့လေ။ ဒေါကျဒေါကျ..ဒေါကျ…… ဝမေငျးကမီမှနျ့ကို…မကျြစပွဈပွလိုကျတယျ။မီမှနျကဝလေငျးမကျြစပွဈတာကို..အထာသိတော့… ခဈြစ ဖှယျမကျြစောငျးထိုးပွီးတော့..ပေါငျရငျးနီးပါးထိရောကျနတေဲ့…ပတျထားတဲ့ ဘတျကို..အပျေါထိနညျးနညျးတငျးအောငျဆှဲပွီး တော့… အပျေါပိုငျးကိုတော့…သဘတျနညျးနညျးခြောငျသှားအောငျ ရငျညှနျ့ထဲလကျခြောငျးလေးထညျ့ပွီး..လှုပျလိုကျတော့သ ဘတျနညျးနညျးပွသှေားတယျ။
တငျပါးအပွညျ့ထိုငျထားပွီးနောကျကိုလှနျခလြိုကျတယျ။ပေါငျနှဈခြောငျးကို..နညျးနညျးကားလိုကျတယျ…..လကျကိုခေါငျးအောကျ ထိုးထညျ့လိုကျကာ… ခုတငျခွရေငျးမှာပကျလကျလှနျပွီးတော့..တီဗီကွညျ့နတေဲ့..ဆကျစီကကြပြေါငျလုံးလှလှကောငျမလေးတဈ ယောကျအဖွဈ… တံခါးမဖှငျ့ခငျ…စက်ကနျ့ပိုငျးလောကျအတှငျးမှာ လုပျပလိုကျတာ။ တံခါးဖှငျ့လိုကျတော့… ဝိတျတာကောငျလေးဝငျ လာပွီး….မကျြလုံးတှကေ..မီမှနျ့ဆီမှာပဲဆိုတာသိနတေယျ….ဘယျယောကျကြားမှ…ဒီဘျောဒီ ဒီပို့ဈနဲ့ကတော့ နှဈယောကျထဲကဆို ရငျ အတငျးကငျြ့ခံရမှာ။မီမှနျလဲ…ကွညျ့နမှေနျးသိတော့မသိခငျြယောငျဆောငျပွီး… တီဗီထဲမှာအာရုံရောကျနသေလို..လုပျနလေိုကျ တယျ။
အခနျးထဲမှာလဲ…ယောကျကြားကဖုနျးတဈလုံးကိုငျပွီးVDO ရိုကျနတော…နောကျတဈယောကျကကောငျမလေးကို…မကျြနှာဖုံးစှပျ ပွီး ဗငျြးနတော။ဝမေငျးကတော့မသိသလိုနဲ့… ဖုနျးကွညျ့ပွီးတော့…ဝိတျတာလေးလာပို့တဲ့Blcakshield ကိုလှမျးယူလိုကျတယျ။ “တဈခါတညျးရှငျးပေးရမှာလား…” “ရတယျ အကို Check out ထှကျမှ ရှငျးလဲ ရတယျ” ဝိတျတာကောငျလေးထှကျသှားတော့…… ဝမေငျးလဲပကျလကျလေးဖွဈနတေဲ့…မီမှနျ့ရဲ့ပေါငျကွားကို…မကျြနှာလေးအပျပွီး မွတျမွတျနိုးနိုး နမျးလိုကျတယျ။ “အနံ့တဈမြိုးရ နတေယျ သဲ” ခဈ….ဆိုပွီး…မီမှနျ…ရီလိုကျပွီး…ထထိုငျပွီးတော့…ဝမေငျးကိုဆှဲထူပွီး… “လာကုတငျပျေါတကျ အေးဆေးပွောပွ မယျ” ဝမေငျးစိတျထဲမှာစဉျးစားလိုကျတော့…လီးကတငျးလာတယျ။စိတျဆိုးသှားတာမဟုတျဘူး… စိတျထလာတာ။ကုတငျပျေါ မှာ..ဝမေငျးကိုပကျလကျလှနျပွီး…မီမှနျကဝမေငျးမကျြနှာကို ခှထိုငျလိုကျတယျ။ “ကို..သခြော အနံ့ခံကွညျ့” “အငျး…” “မလကျြနဲ့ နျော” “အှနျး” “ကို…သခြောရှုလို့ရအောငျလို့ရတေောငျမဆေးဘူး..ရှူရှူးပေါကျပွီးတာတောငျ..တဈရှူးလေးနဲ့ပဲ သုတျတာ”
“ဝမေငျးလဲ…….ဘောငျးဘီကိုစမျးခြှတျလိုကျတယျ” “ကို…….ကိုညီနလေ့ညျကလုပျသှားတာ….ကိုရတဲ့အနံ့ကသူ့လီးနံ့ နံလား” “အငျး.လရညျတှကေိုထုတျသှားသေးလား….ကှိုငျနဲ့လား” “No..သူ့လရညျတှကေ သဲတငျပါးမှာ…ပနျးထုတျသှားတာ…ကို ရှုကွညျ့” မီမှနျကိုမှောကျခုံဖွဈအောငျလုပျပွီး…တငျပါးတှကေို..ဝမေငျးတဈယောကျမကျမကျမောမောရှုကွညျ့တယျ။မီမှနျ့ရဲ့ပိပိကိုလညျး… တငျသားနှဈဖကျကိုဖွဲပွီး…သခြောရှုကွညျ့နမျးကွညျ့လုပျတယျ။ “သဲ ကိုယျမရတော့ဘူး” “အငျး…ကို့ဟာကို…သဲထဲကိုထညျ့ထား… သဲဒီပုံစံနဲ့ပဲ….ပွောမယျမကျြနှာပူလို့” ဝမေငျးကမီမှနျ့တငျပါးကိုအားနဲ့ညှဈလိုကျတယျ….ပွီးတော့မှောကျခုံလေးဖွဈနတေဲ့… မီမှနျ့ တငျပါးနှဈဖကျကိုဖွဲပွီး…အရညျကွညျတှစေို့နတေဲ့…အရေးပွားဖုံးနတေဲ့ညီလေးကို… တှငျးဝကို ခြိနျပွီး ထိုးထညျ့လိုကျတယျ။
“အား..ကောငျးလိုကျတာအထဲမှာနှေးနတောပဲ” “သဲလဲ ကောငျးတယျ…..သဲပွောမယျ” “အငျးး” “မလုပျနဲ့ဦးနျော..” ဝမေငျး… မှောကျခုံထပျရကျသားလေးနဲ့…မီမှနျ့ရဲ့ဂုတျသားတှကေိုနမျးလိုကျတယျ…လကျတှကေိုမီမှနျ့ခြိုငျးအောကျကိုနှိုကျပွီးသိုငျးဖကျလိုကျ တယျ။ “ကို” “အငျး” “ကိုခိုငျးလို့…သူ့ကိုလကျခံတယျပွောပွီး…ဒီကွားထဲလဈရငျ လဈသလို…လာနမျးလိုကျဖကျလိုကျလုပျတာ..သိ တယျနျော” “အငျးသူကကော..ကိုယျလုံးဝမသိဘူးလို့ ထငျနတောမလား” “အငျးပေါ့..သူ့မှာလဲမိနျးမရှိတာပဲ..သူဘယျသူမှလြှောကျ ပွောလို့မှမရတာ… ပွောရငျ..သူပဲပွသာနာတကျမှာလေ…” “အငျးပေါ့…ကိုတို့တှကျထားတဲ့ အတိုငျးပဲပေါ့နျော” “ဟုတျတယျ… နားထောငျ… နလေ့ညျက..သဲနောကျဆုံးကနျြတဲ့checkoutခနျးရှငျးမယျလုပျတော့…အခနျးထဲမှာ… ပနျးကနျတှတှေေ့ လို့RoomServiceကိုဖုနျးဆကျတော့…သူနဲ့တိုးတာလေ…” သူက…သူလာခဲ့မယျပွောတော့…သဲက သူအဲလောကျ လုပျမယျလို့ဘယျ ထငျမှာလဲ…. ပွီးတော့..သူကမလာခငျထဲက သူမြားတှေ…ဘာလုပျနလေဲဆိုတာကွညျ့လာတာ…ပိုငျပွီဆိုမှ သဲကိုလုပျတာ… “အငျး” ဝမေငျးလဲ…စိမျထားတဲ့တှငျးထဲမှာ…ငပဲကတျောတျောတငျးနပွေီ။
“အဲဒါကိုညီလဲရောကျလာတော့..အခနျးကိုလော့ခလြိုကျတယျသဲလညျးလနျ့သှားတာပေါ့..သဲတို့ကအခနျးသနျ့ရှငျးရေးလုပျရငျ… တံခါးပိတျလို့မှမရတာ..” “ကိုညီဘာလုပျတာလဲ..တံခါးဖှငျ့လို့ပွောတော.” “မီမှနျဘာမှမပူနဲ့…Incharge တှမေရှိဘူး…ဒီ အခနျးCheck outလုပျတာလဲ…Receptionကလဲခကျြခငျြးမသှငျးဘူးသိလား…” (ဟုတျတော့လဲဟုတျသညျ…မီမှနျလညျးအခနျးရှငျး တာ ပွီးသလောကျဖွဈနတော…အခနျးက..မနကျ၁၀နာရီလောကျဝငျပွီး…လုပျပွီးထမငျးစားပွနျသှားတာ။အိပျယာခငျးတောငျ မ တှနျ့ဘူး..အောကျနားလေးပဲ ….နညျးနညျးဆှဲဆနျ့လိုကျတာ လုပျနကေလြေ….DayUseတှကေ..အခနျးသိပျမသုံးလို့ဂြာကွီးက… မ လိုအပျရငျဆှဲဆနျ့လို့မှာသှားတာ…ရခြေိုးခနျးကတော့ ရှငျးပွီးသှားပွီ)
“အိပျယာခငျးကို….ကုနျးပွီးဆှဲဆနျ့တုနျးနောကျကနလေေ… ကိုညီကမီမှနျ့ကိုအတငျးဖကျပွီး…နို့တှကေို ညှဈတာ…..သိလား ကို” “ဒ ငျးဆကျပွော မရပျနဲ့” “သဲကိုပေါငျကွားကိုစမျးတော့…သဲလညျးအတငျးရုနျးတာပဲ ကိုညီက အရမျးသနျတယျ…” “မီမှနျရယျတဲ့ နငျ က နငျ့ဘဲနဲ့လုပျဖူးနတောပဲ.ငါလုပျခငျြတယျ” လို့ပွောတော့ “သဲလညျး… မရပါဘူးပွောသေးတယျ” “သူကအတငျးကွီး..လကျက လဲမွနျတယျ…သဲဘောငျးဘီကို…ခြိတျဖွုတျတာမွနျမှမွနျ… ပွီးတော့ဆှဲခလြိုကျတာ….ပွီးသဲကိုတှနျးလိုကျတော့…ခုကိုနဲ့နေ သလို….ဖွဈနတောပေါ့ ” “သဲကထလို့မရတော့ဘူး…..သူလဲဘောငျးဘီခြှတျပွီး…….တဈခါတညျး ထိုးထညျ့တာပဲ” “အား..ကိုညီ ဖွညျးဖွညျး….” “ကောငျးလိုကျတာ.. မီမှနျရယျ” “နငျအရမျးမအျောနဲ့နျော….လို့ပွောတယျ…ကိုပဲစဉျးစားကွညျ့လေ… အလုပျခြိနျမှာ အလုပျခံရတာ..အသံထှကျလို့ရမလား” ဝမေငျး…မနနေိုငျတော့ဘူး….နောကျကနမေီမှနျကို…ဖွညျးဖွညျးခငျြးဖိပွီး စလုပျနပွေီ။ “ကိုညီ နဲ့လုပျတော့ ကောငျးလား”
“ကိုကတော့လေ…မကောငျးနမေလား။သဲဟာလေးကကပျြနတော…သူ့ခမြာအသကျတောငျ မရှုနိုငျဘူး….ဒါတောငျ အိမျထောငျရှိ လို့” “အေးပါ…ကိုကစတာပါ…ငါ့သဲလေးအရမျးကောငျးပွီး ကပျြနတော..ကိုအသိဆုံးလေ….ဆကျပွော” “အငျးအဲထိပဲလေ… သူ လဲမွနျမွနျလုပျပွီး…သဲတငျပါးပျေါမှာ အရညျထှကျပွီး….မွနျမွနျပွနျထှကျရတာပေါ့…” “သဲကိုလုပျတာ ကောငျးလား..” “အငျး ကောငျးတယျ…ကွောကျတာလဲပါတယျ….ခိုးစားသလို ဖွဈတော့…ပိုကောငျးတယျ..” “သဲကိုပွီးလိုကျတော့မယျနျော…” “အငျး…..ပွီးခငျြရငျ ပွီးလိုကျတော့…..” ဝမေငျးအားရပါးရဆောငျ့ခပြွီးတော့… အရညျတှအေထဲပနျးထညျ့လိုကျတယျ။မီမှနျ လဲ….အရညျတှအေထဲဝငျလာတော့.. တဈခါပွီးသှားတယျ။အရညျတှကေအမြားကွီးလေ။
အဲနကေ့တော့နှဈယောကျသား…အိမျစောစောပွနျရမယျဆိုတာနဲ့…တဈခေါကျပဲလုပျပွီးပွနျလာခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့လေ တဈခေါကျ ဆိုတာလဲ..ကနြေပျမှုအပွညျ့ရတယျ။မီမှနျလညျး..အဲ့အရသာကိုကွိုကျတယျ။နှဈယောကျလုံးကွိုကျတာပါပဲ….စိတျတူကိုယျတူ ခဈြသူတှလေေ။ ဒီလိုနဲ့တဈနှဈလောကျကွာတော့… ဝမေငျးနဲ့မီမှနျနဲ့လကျထပျဖွဈခဲ့တယျ။ဘာအကွောငျးရယျမှတော့မဟုတျဘူး။ ဝမေငျးကို…သူ့အိမျကသင်ျဘောတကျခိုငျးတာနဲ့ဝမေငျးက… မီမှနျနဲ့လကျထပျပရစဆေိုတော့….နှဈဖကျမိဘလကျခံတာနဲ့လကျထပျ ဖွဈခဲ့တာပါ။
လကျထပျတယျဆိုပမေယျ့လဲ…ဟနျးနီးမှနျးထှကျပွီးတော့… သူ့အိမျကိုယျ့အိမျတဈလှညျ့စီနဖွေဈကွတာပေါ့။Taxiကရတဲ့ ပိုကျဆံ က… ဘဝတဈဆဈခြိုးပွောငျးဖို့မဖွဈနိုငျဘူးလေ။လကျထပျပွီး…၃လလောကျရှိမလားမသိ။ဝမေငျးလညျးဟိုက ချေါတာနဲ့ထှကျသှား တာပါပဲ။ဝမေငျးအိမျက…ဝမေငျးအခနျးမှာတော့ မီမှနျ သိပျမနဖွေဈဘူး။ ကိုယျ့အိမျမှာပဲကိုယျနဖွေဈတာ… တဈခါတဈလလှေမျး ချေါရငျတော့၁ညမြိုး၂ညမြိုးသှားအိပျရတယျ။သူ့အိမျက..အေးဆေးပါပဲ။ဝမေငျးအကို… ကိုအောငျထှနျးဆိုတဲ့တဈယောကျ.. မူးမ လာရငျတော့အေးဆေးပါပဲ။သူကအမွဲတမျးတော့…မသောကျပါဘူး။ပွီးတော့သူက… သင်ျဘောတကျဖို့လုပျတော့ဆေးကတြယျဆို လို့..အိမျမှာပဲနတော။
အိမျကလဲအရကျသောကျတာ…မကွိုကျပမေယျ့..တဈဖကျမှာကလဲ..သားကွီးကမွေးဦးဆိုတော့… အဖိုးအဖှားတှကေ..မနတေော့မ နိုငျလို့လှတျထားရတာပေါ့…… မီမှနျလဲအလုပျမှာ…ကိုညီနဲ့မကောငျးတာတှမေလုပျဖွဈတာ ကွာပါပွီ။လူမလဈတာလဲပါတာပေါ့။ ပွီးတော့… ဟိုတယျကလဲနောကျတဈလုံးဆောကျနတေော့….ကိုညီလဲအဲဖကျမှာကနြတောမြားတယျ။လကျထပျပွီးတော့…သူလဲ နညျးနညျးတော့ ရှောငျပါတယျ။.မီမှနျလဲ…လကျထပျပွီးခါစကတော့…ပြျောလဲပြျော… ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ပဲဆိုတော့..ဘာအကွောငျးနဲ့မှ မဟုတျပဲနဲ့ပုံမှနျအတိုငျးပဲနဖွေဈတယျ။ ဒါပမေယျ့…ပွောငျးလဲလာတာကတော့ဂြာကွီးပဲ… ကိုမိုကျကယျပဲဆိုပါတော့… နိုငျငံခွားသားတှခေျေါရလှယျအောငျ…မိုကျကယျလို့ပေးရငျးနဲ့…အဲ့နာမညျပဲလူတှသေိကွတော့တယျ။ မိုကျကယျနာမညျကတော့ကွီး တယျ။မိနျးမကိစ်စနဲ့ပကျသကျလာရငျ…ဒါကလဲ…အခငျြးခငျြးတှလေောကျပဲသိတာပါ။
တဈနတေ့ော့…မီမှနျ့ကိုရုံးခနျးထဲကိုချေါပွီးတော့…အသဈဖှငျ့မယျ့ဟိုတယျမှာ…ကွီးကွပျရေးမှုးရာထူးနဲ့ပွောငျးရမယျလို့ချေါပွော တော့… မီမှနျ အံသွသှားတယျ။ “ဂြာကွီးကလညျး နောကျနပွေနျပွီ….” “အေးတကယျပွောတာ…ဟိုဖကျကဟိုတယျလို့သာပွော တာ… အခနျးက၁၆ခနျးလောကျပဲပါတာ။..နငျနဲ့အတူHousekeepingကနှဈယောကျပါမယျ.။ “တကယျဆိုရငျတော့ ကြေးဇူးတငျပါ တယျ..” “ဒါပမေယျ့…နငျကြေးဇူးတော့ ဆပျရမယျနျော” “ရှငျ” “နောကျမှပါ.” အဲဒီ့အခြိနျမှာဂြာကွီး..ကွညျ့လိုကျတဲ့အကွညျ့တှေ က… မီမှနျ့မကျြလုံးထဲကနေ…ရငျထဲမှာအလိုလိုသိလိုကျတာက….ညီမလေးတောငျကွုံ့သှားသလို ခံစားလိုကျရတယျ။
“ဒါနဲ့ စကားမစပျ…နငျ့ယောကျကြားသှားတာ..ဘယျလောကျကွာပွီလဲ….” “နှဈလလောကျ ရှိပွီ ဂြာကွီး…” “အေး နငျလဲ…..ဟာနရေော ပေါ့.” “ဟာဂြာကွီးကလဲအရမျးနောကျတာပဲ….” ဆိုပွီးရုံးခနျးထဲက… အပွေးလေးထှကျခဲ့တယျ။ဂြာကွီးရဲ့မကျြလုံးတှေ ကတော့..တုံခါသှားတဲ့တငျသားတှကေို…မကျြတောငျမခတျပဲငေးလို့ရယျ ဒီလိုနဲ့အသဈပွောငျးပွီး…အလုပျလုပျရတဲ့ဟိုတယျကြ တော့… ရုံးခနျးအသေးလေးတဈခုပါတယျ။တခွားဝနျထမျးတှတော့မရှိပါဘူး။HKကမီမှနျရယျ…ကောငျလေးတဈယောကျ… ကောငျမလေးတဈယောကျရယျဆိုတော့…အဆငျပွပေါတယျ။ပွီးတော့….ဂြာကွီးလာရငျထိုငျဖို့ရယျGuestတှလောရငျတော့… ဟို ဘကျဟိုတယျကလာပို့တဲ့ဝနျထမျးတော့ပါလာတောပေါ့။
ဒီလိုနဲ့တဈရကျပေါ့လေ…မီမှနျလဲအရငျကလောကျ…မပငျပနျးတော့ပဲအလုပျလုပျရတာရယျ… ယောကျကြားကလဲအဝေးရောကျနေ တော့..လူကလဲငယျ..စိတျကလဲကွှ…ယောကျကြားကလဲခှငျ့ပွုထားဆိုတော့… တဈခါတဈလဆေိုစိတျက.. လိငျကိစ်စပဲရောကျနေ တာပေ့ါ။ ဝမေငျးခမြာလဲ…သူ့မိနျးမလေးကိုစိတျမခရြှာတော့….မသိတဲ့လူတှနေဲ့… သူမရှိတုနျးဖွဈလို့…သူမြားတှသေိသှားမှာရယျ စိတျခရြတဲ့လူဆိုလုပျ…..ပွီးရငျသူ့ဆီကိုမီမှနျ့မကျြနှာမပါတဲ့…. VDO ဖိုငျပို့ပေးရမယျဆိုပွီး…ခှငျ့ပွုထားတာဆိုတော့… မီမှနျ့ အကွိုကျပေါ့။ ပွီးတော့သူ့ယောကျကြားကိုလဲ…..ပြျောရှငျစခေငျြတာတဈခုတညျးမဟုတျပဲ….နှဈယောကျလုံးပြျောပွီး…ခိုငျမွဲသှား မယျ့.. ခွလှေမျးမြိုးပဲလှမျးမယျလို့ဆုံးဖွတျထားတယျ။တဈရကျတော့… စိတျတှကေတအားထနတောနဲ့Viberကနေ….ဝမေငျးဆီကို မကျဆပေို့လိုကျတယျ။
“ကို…ဒီနမေီ့မှနျဘယျလိုဖွဈနတေယျမသိဘူး လိုနတေယျ…” “ခနနတေော့….စာပွနျလာတယျ…ကိုညီရှိလားမေးတော့” “မသိဘူး…” “စညျးကမျးအတိုငျးနျော…လုပျဖွဈရငျ ” “အငျးပါ ကိုရယျ.” နောကျတော့….မီမှနျလဲကိုညီဆီကို… ဖုနျးဆကျတော့ခကျြခငျြးမ ကိုငျဘူး။ခနနတေော့ ပွနျချေါတော့ “ကိုညီ ဟိုတယျ အသဈဖကျကို မလာဘူးလား” “ကိစ်စမပျေါသေးဘူးဟ… လှတျမှလာလို့ရမှာ” “”ဒါပမေယျ့.ဂြာကွီးနငျတို့ဖကျကို လာစဈမယျပွောနတေယျ” “တကယျလား” “အေး” “ဒါဆို ဒါပဲ အားရငျ လာခဲ့ဦး” “အေးပါ” ဂြာ ကွီးလာမယျဆိုတော့…အောကျကနှဈယောကျကို… သကျဆိုငျရာအထပျတှမှောDeepCleaningလုပျဖို့ပွောပွီးစာရငျးဇယားတှေ ပွငျထားလိုကျတယျ။တျောသေးတယျ…
ကိုညီဆီ ဖုနျးဆကျလိုကျတာ…တျောကွာတဈခုခုအမှားတှသှေ့ားရငျ…လာမှ..ကိုယျက အလုပျလုပျရဲ့သားနဲ့ အပွဈပွောခံနရေမှာ.. လာမယျ့လာတော့လညျး…မီမှနျ့ဆီကိုတနျးလာတာပါပဲ။အလုပျကိစ်စကနညျးနညျး… မီမှနျ့ ကိုဏှာကွညျ့ကွညျ့တာကမြားမြား..မီမှနျကလညျး…စိတျကတဈမြိုးဆိုတော့….အဲ့မှာစတှတေ့ာပေါ့…. စကားပွောနရေငျးနဲ့…….ဂြာ ကွီးကကတေီဗီရောကျဖူးလားမေးတော့… မရောကျဖူးဘူးဂြာကွီးဆိုတော့…..ညနငေါလိုကျပို့မယျဆိုပွီး..ဖွဈလရေော…..စား နကေကြွောငျပါးကွီးဆိုတော့..အနအေထားကိုကွညျ့ တာနဲ့မကျြလုံးကိုကွညျ့တာနဲ့…နညျးနညျးတော့သဘောပေါကျတယျ.။အဲ ဒါနဲ့..ဂြာကွီးရှမှေ့ာပဲ……ဝမေငျးကို ဖုနျးချေါလိုကျတယျ ။
(ဝမေငျးက..သင်ျဘောတကျတယျဆိုပမေယျ့…ကာတာက ဆိပျကမျးမှာပဲအထိုငျခရြတာပါ.Internetကလဲရဆိုတော့) ကံမြားကောငျး ခငျြတော့…ဖုနျးကျုတဈခါတညျးတနျးကိုငျတာပဲ… ကိုရေ….ဒီမှာဂြာကွီးကမီမှနျ့ကို….ကတေီဗီလိုကျပို့မလို့တဲ့… (ဂြာကွီးကိုကွညျ့ တော့…ဘာလုပျရမှနျးမသိဖွဈနတော….ဖနျပါတယျဆိုမှ…သူ့ယောကျကြားကိုလှမျးပွီး… သံတျောဦးတငျရတယျလို့ထပွီးသှားမလို့ရှိ သေး…မီမှနျကမကျြစိတဈဖကျမှိတျပွီး…လကျကာပွတယျ ခဏစောငျ့ပေါ့ဆိုပွီးပေါ့) ဝမေငျး ။ ။ ”မီမှနျတဈယောကျတညျးလား..” မီ မှနျ ။ ။ ”ဟုတျတယျကို အလုပျကလူတှပေါတယျ…” ဝမေငျး ။”ဂှငျတှပွေီ့းပေါ့….နောကျကရြငျ… အိမျမပွနျနဲ့တော့ တဈခါတညျး လုပျပလိုကျတော့” မီမှနျ ။ ။ ”ဂြာကွီးလညျးပါတယျ..” ဝမေငျး ။ ။” ရီကော့ ယူခဲ့” မီမှနျ ။
။ ”ဟုတျ ဒါပဲနျော…” မီမှနျကဂြာကွီးဖကျ လှညျ့လိုကျတော့.”အလုပျက…ဘယျသူမှ မပါဘူးလေ..” “ဂြာကွီးကလဲ အဲလိုပွောလို့ဖွဈမလား” အခြိနျတှကေ…တဈရှရှေ့နေဲ့ ကုနျဆုံးလို့လာပါတယျ။အရငျတုနျးကလိုတော့… ဖွဈတော့ပါဘူး။သိပျမကွောကျတတျတာလဲပါတယျ။အိမျကိုတော့ဖုနျးဆကျပွော လိုကျပါတယျ။အိမျကတော့…ဟိုတယျမှာစလုပျကထဲကဆိုတော့…ပွသနာမရှိဘူး။ တကယျတော့မီမှနျကကလပျသှားခငျြတာ။ တဈခါမှမရောကျဖူးလို့…ဒါပမေယျ့… လူတှမွေငျမှာလဲကွောကျတယျ။အခုလို..ညဖကျကိုသှားမယျ့ကိစ်စမြိူးတောငျ….လုပျမယျဆို ပွီးတဈခါတညျးဆုံးဖွတျလိုကျတာ။တဈခါတ ဈလတေောငျ…အားတှေ ဘယျလိုရှိလာမှနျးမသိဘူး…မိုကျရူးရဲမိတာမြားလားမသိပါ ဘူး။ ညနကေတြော့… အခြိနျးအခကျြလုပျထားတဲ့အတိုငျး…ဟိုတယျရဲ့၅မှတျတိုငျကြျောလောကျမှာစောငျ့ပွီးတော့… ဂြာကွီးကားနဲ့ လာချေါတော့လိုကျသှားတယျ။ကားပေါရောကျတော့..ဂြာကွီးကဦးထုတျတဈလုံးပေးတယျ။မီမှနျလဲ..ဂြာကွီးရဲ့အကှကျကမြှု ကိုတှေ့ တော့…တျောတျောကနြေပျသှားတယျ။
အစစအရာရာစဉျးစားတတျလို့လဲ…ဂြာကွီးဖွဈနတောလေ။ ဆံပငျကိုဖါးလြားခပြွီး…ဦးထုတျဆောငျးလိုကျတော့… တျောရုံဆို မှတျမိမှာမဟုတျဘူး။ဒီလိုနဲ့တောငျဥက်ကလာဖကျကို..ရောကျလာကွတော့…ဆိုငျနံမညျကိုတော့မသိပါဘူး။ ဆိုငျကခွံထဲမှာဖှငျ့ထား တယျ။လူကလဲသိပျမရှုပျဘူး..ကွညျ့ရတာ…အသနျ့တှပေဲလာကွတာထငျတယျ။လှယျအိတျကိုတော့… ကားထဲမှာထားခဲ့ပွီး…ဂြာ ကွီးနောကျကိုပဲလိုကျလာခဲ့တယျ။အထဲမှာလဲသူ့ကိစ်စနဲ့သူတှပေါ..ဘယျသူ့မှလဲကွညျ့မနဘေူး။
အနောကျဖကျကိုလြှောကျသှား တော့…လှကေားလေးရှိတယျ။နှဈထပျအဆောကျအဦးအပျေါတကျဖို့ဆိုပွီး…အဲကနေ တကျလာတော့ …. ဝိတျတာကောငျလေး က….”အကိုအခနျးယူမှာလားဆိုတော့” “ယူပွီးသား.အဲလကျဈတို့ယူထားတဲ့အခနျးလိုကျပို့ဆိုတော့’ “ဟုတျကဲ့ဆိုပွီး”ထောငျ့ကကြ အခနျးဖကျဆီကို..လြှောကျသှားရတယျ အထဲကသီခငျြးသံကတော့DJအသံနဲ့… တံခါးခေါကျလိုကျတယျ။.ခနနတေော့…အထဲကနေ လော့ကိုဖွုတျလိုကျသံကွားရတယျ။မိုကျတယျ ကိုယျပိုငျ အခနျးလိုပေါ့…… အထဲဝငျတော့…စားစရာအပွညျ့နဲ့သောကျစရာတှေ ကို..အခနျးအပွငျက…အလငျးရောငျနဲ့မွငျလိုကျရတယျ။တံခါးလာဖှငျ့တာက… ထောငျထောငျမောငျးမောငျးနဲ့လူတဈယောကျ… အခနျးထဲမှာက…ကောငျမလေးတဈယောကျ..မီမှနျတို့အရှယျလောကျပဲ….လှတယျ။
“အေးငါစောငျ့နတော နှဈနာရီလောကျ ရှိပွီ” အဲ့အခြိနျမှာအခနျးထဲက…အနံတဈမြိုးရတယျ။မီမှနျသိလိုကျတာကတော့… အထဲက နှဈယောကျ..အလုပျတော့ဖွဈထားတယျဆိုတာပဲ။အသေးစိတျတော့..မရေးတော့ပါဘူး။ တကယျတော့ကတေီဗီသာဆိုတယျ….ကု တငျလိုထိုငျခုံပါတယျ……ရခြေိုးခနျးအိမျသာလဲပါတယျ။စောငျမပါတာတဈခုပဲ… ခေါငျးအုံးအသေးလေးတှကေ…မှီဖို့ပေးထားတယျ ဆိုပမေယျ့…အိပျလို့ရပါတယျ။ နောကျတော့… တဈယောကျနဲ့တဈယောကျမိတျဆကျပွီတော့…သောကျကွတာပေါ့။နောကျတဈနာရီ လောကျနတေော့… သူတို့ပွနျသှားရတယျ။ကောငျမလေးက..အိမျပွနျရမယျဆိုတော့…. ဂြာကွီးနဲ့နှဈယောကျထဲကနျြခဲ့တော့… ဂြာ ကွီးကရီမုဒျကိုကိုငျပွီးပွောငျးလိုကျတော့…ရုပျရှငျဖကျကို….ပွီးတော့ အသံကို အကယျြကွီးမဟုတျပဲ…..နညျးနညျးလြှော့လိုကျ တယျ။
“ဂြာကွီးဒီနရောက…ဘယျလိုနရောကွီးလဲ” “အငျး…ဒီနရောကဆကျရှငျနဲ့ဖှငျ့တာမဟုတျဘူး..ဟိုတယျလိုပဲ ယူရငျတဈရကျလုံးယူရ တာ… ဈေးကလဲ ကွီးတယျ သီခငျြးဆိုလဲရတယျ.. ရုပျရှငျကွညျ့ခငျြလဲ ရတယျ…. ညကိုးနာရီလောကျကရြငျ စောငျတှေ လာပေး မယျပေါ့…” မီမှနျလဲငွိမျသှားတယျ.(စိတျထဲကလဲ.သူနဲ့ကိုယျနဲ့က အလုပျမှာဆိုရငျလဲ…အဲလိုဆကျဆံရေးမြိုးလဲမဟုတျဘူး။ ပွီး တော့… ကတေီဗီသှားမယျဆိုပွီးချေါလာတယျ…ပွီးတော့ ဟိုတယျလိုအခနျး….ကိုယျကလဲမသိရငျကွေးစားတဈယောကျလို… ဘာ မှနျးညာမှနျးမသိလိုကျလာတယျ။သခြောတာကတော့…ဒီညလုပျဖွဈကွမယျ။သူကဘယျလိုစမှာလဲ…ပွီးတော့ ဘယျလို လုပျကွမှာ လဲဆိုပွီး..တှေးနမေိတယျ….) တကယျတော့အခြိနျက… အဖွပေေးသှားပါတယျ။ဂြာကွီးပေးတဲ့ခှကျကိုယူပွီးသောကျကွတယျ။ ရုပျရှငျကားကလဲ….CaptailPhilipသုံးလေးခှကျလောကျကုနျ တော့…နညျးနညျးလေး သှေးပူလာတယျ။
“ဒေါကျဒေါကျ” တံခါးခေါကျသံနဲ့ဖုနျးကနာရီကိုကွညျ့လိုကျမိတော့…၉နာရီထိုးနပွေီ။ဂြာကွီးကတံခါးဖှငျ့ပွီး… စောငျနှဈထညျကိုလှမျးယူတယျ။ပွီးတော့..အျောဒါထပျမှာတယျထငျတယျ။ခဏနတေော့…… ကောငျလေးက ဘီယာပုလငျးတှေ လာပို့တယျ။ စားပှဲပျေါမှာ..ပုလငျးကတော့နညျးနညျးပဲကနျြတော့တယျ။ အမွညျးတှကေတော့ကနျြသေးတယျ။ဘာမှာဦးမလဲဆိုတော့ …ခေါငျးပဲခါပွလိုကျတယျ။ဝိတျတာကောငျလေးထှကျသှားတော့…ဂြာကွီးကတံခါးကိုလော့ခလြိုကျတယျ။ပွီးတော့… မီမှနျ့ဘေးနားမှာထိုငျခကြာ…တဈခါတညျးဖကျပွီးမီမှနျ့နှုတျခမျးတှကေိုလာနမျးတယျ။
မီမှနျတို့…အငမျးမရ နမျးကွတယျ…..ဂြာကွီးကော..မီမှနျပါ ခနနတေော့…….နှဈယောကျသားအဝတျအစားတှေ….မရှိတော့ပါဘူး။ “ဂြာကွီး” မီမှနျ့ရဲ့ဖုနျးကို… ကငျမရာဖှငျ့ပွီးလှမျးပေးလိုကျတယျ။ဗီဒီယို ရိုကျပေးဆိုပွီးတော့……ဂြာကွီးရဲ့ ကွီးမားပွီးကော့နတေဲ့ လီးကိုစုပျပေးတယျ။ဂြာကွီးလဲ… ကွာကွာမခံနိုငျဘူး။မီမှနျ့ကလှတော့….စိတျတှကွှေပွီး… မီမှနျ့ပါးစပျထဲမှာပွီးသှားတယျ။ကငျမရာနဲ့ဗီဒီယိုရိုကျထားတာကိုပွနျကွညျ့တော့…..ဘာလုပျမလို့သူမြားတှမွေငျဦးမယျ..ဆိုတော့မီမှနျ့ ယောကျကြားဆီပို့မလို့ဆိုတော့… ဂြာကွီးကပွာကရာ ဖွဈသှားတယျ…..”သပွေီပေါ့…”
မီမှနျက…တဈခှနျးတညျး ပွောလိုကျတယျ။ “ဂြာကွီးရယျစိတျမပူပါနဲ့…မီမှနျ့ယောကျြားက…အဲလို မီမှနျ့သူမြားနဲ့လိုတာမွငျမှဖီးလာတာ…သူကိုယျတိုငျခှငျ့ပွုထားတာဆိုတော့…” သကျပွငျးခပြွီး…”တျောသေးတာပေါ့…ငါကလနျ့သှားတာ….နငျ့ယောကျကြားက ကှတျကိုး ပေါ့” မီမှနျခေါငျ့ငွိမျ့လိုကျတယျ… နောကျတော့..ဂြာကွီးကမီမှနျ့ပေါငျကွားထဲဝငျပွီး…..ဘာဂြာကိုငျပေးတော့ကောငျးလိုကျတာဆိုတာလေ….ဂြာကွီးကလဲ… ဂြာကွီးဆိုတဲ့အတိုငျးပဲ…အမှုတျကလဲ…သိပျကောငျးဆိုတော့.ပုံတောငျနှဈပုံလားပဲ..ရိုကျနိုငျတယျ…. ဖီးတကျတယျဆိုတာတော့လေ။
ဂြာကွီးလီးဝငျနတေဲ့ပုံ…လေးဖကျထောကျ… နှဈပုံလောကျပဲမှတျတမျးယူပွီးတော့….မီမှနျ့တို့လိုးကွတာပေါ့။စံခြိနျမှီ..ကိုယျ့ယောကျကြားထကျကွီးတဲ့လီးက…အဖုတျထဲကိုဝငျလာတဲ့ အခါ…..အရမျးကောငျးတယျ။ဂြာကွီးကတံတှေးတှေ… ခနခနမီမှနျ့စောကျဖုတျပျေါကိုထှေးခလြိုကျ….ပွီးရငျလီးထိုးထညျ့လိုကျ….တဈခကျြခငျြးလုပျတယျ။ စိုရှဲနတေဲ့စောကျပတျထဲဝငျထှကျသံတှေ…တဏှာသံတှေ…တံတှေးတှစေောကျရတှေကေ… ဖငျကွားထဲမှာယားကြိကြိဖွဈနတောတှေ….အရမျးကောငျးတယျ။ဂြာကွီးပျေါတကျပွီးအပျေါကနမွေငျးစီးတော့… ဂြာကွီးကမီမှနျ့မကျြနှာလေးကိုကွညျ့နတော.. “ဂြာကွီးသူမြားမိနျးမကို လုပျတာကောငျးလား….” “ကောငျးတယျ.”
“မီမှနျလဲ ကောငျးတယျ” နှဈခြီလောကျလဲပွီးရော….နှဈယောကျသားအိပျပြျောသှားကွတာ….နှဈနာရီလောကျကွတယျ။အခြိနျကညတဈနာရီ….ထိုးလောကျမှပွနျနိုး ကွတယျ။သိပျမအေးတော့တဲ့…….ဘီယာကိုသောကျကွပွီးတော့…ဂြာကွီးကသူ့လီးကို…မီမှနျ့ပါးစပျနားထိုးပေးလိုကျတယျ။ ဂြာကွီးကိုပုလှမှေုတျနတေုနျး…..Viberကနဖေုနျးလာတယျ။VDOCallဖှငျ့လိုကျတော့……… မီမှနျ့မကျြနှာလေးကိုမှုနျမှုနျလေးတှတေ့ယျ။ကို..သိပျမမွငျရဘူးဆိုတော့……ဂြာကွီးကမီးထဖှငျ့တယျ။တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဘာမှမပွောဘူးပဲကွညျ့နကွေတယျ။ မီမှနျ့က….ကငျမရာကိုဂြာကွီးလီးနားကပျပွလိုကျတော့… ဝမေငျးမကျြခုံးပငျ့သှားတယျ။ပါးစပျကလဲ…မနညျးပါလားလို့အသံထှကျသှားတယျ။အဲအခြိနျမှာဂြာကွီးက… မီမှနျ့ကိုမှောကျခံဖွဈအောငျလုပျပွီး….အောကျဖကျကိုဆှဲလိုကျတော့…ခွထေောကျကအောကျမှာ…အဲ့အခြိနျမှာဂြာကွီးက… မီမှနျ့လကျထဲကဖုနျးကိုလှမျးယူပွီးတော့……ဘေးနားကနမွေငျရတဲ့နရောမှာခြိနျလိုကျတယျ။ဝမေငျးကိုလဲ…မွငျရတယျ…..ဝမေငျးကလဲ အကုနျလုံးမွငျရတဲ့ View ပေါ့။
ဒီတဈခေါကျကတြော့မှဂြာကွီးက…မီမှနျ့လကျနှဈဖကျကိုယူပွီး…နောကျပွနျတငျပါးနှဈဖကျကိုဖွဲခိုငျးတယျ။ဂြာကွီးရဲ့ လကျဝါးကို… မီမှနျ့ပါးစပျနားကိုတပွေီ့း…တံတှေးထှေးလိုကျဆိုတော့….မီမှနျလဲတံတှေးကိုလကျဝါးပျေါထှေးပေးလိုကျတယျ။မြားမြားလေးဆိုတော့… မီမှနျလဲသုံးလေးခါလောကျထှေးပေးလိုကျတယျ။ဂြာကွီးကလကျဝါးထဲကတံတှေးတှကေို…မီမှနျဖွဲထားတဲ့… ဖငျဝမှာကောဖငျမှာကောနှံနအေောငျ..လိမျးလိုကျတယျ။ ပွီးတော့သူ့တံတှေးတှကေို..လကျဝါးထဲထှေးထညျ့ပွီး…… သူ့လီးမှာရှဲနအေောငျသုတျလိုကျတယျ။သုံးယောကျသား…..ဘာစကားမှမပွောကွဘူး။
ကိုယျ့အာရုံနဲ့ကိုယျ….ဂြာကွီးကဖုနျးကိုယူပွီး..ကငျ မရာကိုအနောကျကငျမရာပွောငျးတော့…ဝမေငျးမကျြနာကို မွငျရတယျ။ဝမေငျးက…မီမှနျရဲ့ ဖွဲထားတဲ့ ဖငျကွားကိုမွငျရတယျ။စောကျဖုတျကဖေါငျးကားလို့…ဝမေငျးလီးမှာလဲ..လရညျတှကေစို့လို့လေ။ ဂြာကွီး….ကဒီတဈခါထညျ့လိုကျတာက …..မီမှနျ့ဖငျဝကို… စစခငျြးမဝငျပမေယျ့….ဂြာကွီးဒဈက… တဈခကျြမှာကောကျပွီးပွနျဖွောငျ့ထားပွီးတဈဝကျလောကျကထိုးဝငျသှားတယျ။မီမှနျ့ရဲ့အျောသံကအံကွိတျပွီး…..ထှကျလာတယျ။ဆကျ မထိုးသေးပဲ…ခနနတေော့မှအဆုံးထိကိုအျောသံကွားထဲကဝငျသှားတယျ။
ဂြာကွီးကမီမှနျ့ခေါငျးရငျးမှာလိုးနရေငျးနဲ့ဖုနျးကိုထောငျထားလိုကျတယျ။ကငျမရာလဲပွနျခြိနျရငျးနဲ့..ဒီတဈခါဝမေငျးဖကျကမွငျရတာက တော့…ရှတေ့ညျ့တညျ့မှာ..သူ့မိနျးမမီမှနျနောကျဖကျမှာက…သူ့မိနျးမကိုလိုးနတေဲ့ ဂြာကွီး … ဖငျထဲကိုဖွညျးဖွညျးခငျြး… ထုတျလိုကျသှငျးလိုကျ…ရှုံမဲ့လိုကျမကျြလုံးစငျးသှားလိုကျနဲ့မီမှနျ့မကျြနှာ..နောကျတော့ခကျသှကျသှကျဆောငျ့လာတဲ့… ဆောငျ့ခကျြတှေ… မကျြလုံးတှကေ ဝမေငျးဖကျကိုကွညျ့လိုကျ…စငျးကသြှားလိုကျနဲ့… နောကျဆုံးမှာတော့ဂြာကွီးရဲ့… သကျပွငျးခသြံနဲ့အတူ..မီမှနျ့ပျေါကိုမှောကျကသြှားတယျ။ဝလေငျးရဲ့လကျလဲ…အောကျမှာ လှုပျရှားရငျးနဲ့သုတျထှကျကုနျတယျ။မီမှနျ့ဖငျထဲမှာတော့.. ညှဈညှဈပွီးထုတျနတေဲ့လရညျတှကေ….ဖငျထဲကိုဝငျလို့.. သုံးယောကျသား… ကာမဆန်ဒတှပွေညျ့လို့…အဲဒါကွောငျ့ပွောတာ…….”နှဈဦးနှဈဖကျထဲမကွညျ့နဲ့”သုံးဦးသုံးဖကျကောငျးတာပါဗြာ…….
“ကိုညီ..မလုပ်နဲ့တော့…တစ်ယောက်ယောက်တွေ့သွားလိမ့်မယ်” “ခနလေးပါ မီမွန်ရယ်” ကိုညီနောက်ကနေ… ခပ်သွက်သွက်လေး လုပ်ပြီးတော့…တင်ပါးပေါ်ကို..လရည်တွေတင်ပေးလိုက်တယ်။ “ကိုကြီး…သုတ်ပေးဦး” “အေးအေး” ကိုညီလဲမြန်မြန်သုတ်ပြီး တော့…ညီတော်မောင်ကိုပါ…မြန်မြန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့… တံခါးကိုဟပြီး..ချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။ဘယ်ဝန်ထမ်းမှကော် ရစ်တာမှာ..မရှိတာသေချာမှTrayကိုယူပြီးထွက်လာလိုက်တယ်။ ဖြစ်ပုံကတော့ဒီလိုလေ….ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နာမည်သိပ်မကြီးတဲ့..အတွဲ တွေလည်းလာပုံမှန်လာတတ်တဲ့…Hotelအလတ်စားတစ်ခုမှာပေါ့။ Waiterလုပ်နေတဲ့ကိုညီဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့…မီမွန်စိုးဆို တဲ့Housekeepingကောင်မလေးတို့….Checkoutလုပ်သွားတဲ့အခန်းထဲမှာ… တစ်ယောက်ကလဲအခန်းရှင်းဖို့လာရင်း…ပန်းကန် တွေသိမ်းဖို့လှမ်းခေါ်ရာကနေ…လူလစ်တုန်းအလုပ်ဖြစ်နေတာပါ။
အချိန်ကလည်းနေ့ခင်းဆိုတော့…လူလည်းရှင်းပြီးတော့…အလုပ်လုပ်ရတာကလည်း…ကိုယ့်အလွှာနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့… ဘယ်သူမှမ သိလိုက်ပဲ…အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။မီမွန်မှတ်မှတ်ရရပြောရရင်တော့…ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပါတ်လောက်က… အပြင်မှာ..ကိုညီ့ကိုအဖြေ ပေးပြီးတော့…သိပ်မကြာဘူး..အချစ်ခံရတော့တာပဲ။ ဟိုတယ်မှာလုပ်ရတယ်ဆိုတော့… တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်…ဂျူတီတွေက လဲမတူကြဘူးလေ။ဒါပေမယ့်…အခုနောက်ပိုင်းကျတော့…နည်းပညာကလဲအကုန်လုံးလိုလို… အသုံးပြူနိုင်ပြီဆိုတော့…ညဖက်ကို ညီနိုက်ဂျူတီကျတာတို့ဆိုလည်း…vdo..callပဲခေါ်မလား..chatမလား… ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်လေ။ အဖြေမပေးခင် ကတည်းက…လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ဘဝထဲမှာလည်း…
ကိုညီကရောက်နေတာလဲကြာပြီ။အသက်ကလဲ…မီမွန်ထက်ပိုကြီးတော့…အစစအရာရာကူညီပေးရင်းနဲ့…ရင်းနှီးခဲ့ကြတာပါ… Departmentမတူတော့လည်း..ပိုပြီးကောင်းပါတယ်… တူနေရင် ကြိုက်ဖြစ်ချင်မှ ကြိုက်ဖြစ်မှာပါ ဒီလိုနဲ့အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်လာ တော့… ယူနီဖေါင်းလဲပြီး..အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။ကားဂိတ်မှာအသင့်စောင့်နေတဲ့….ဝေမင်းကိုတွေ့တော့ပြုံးပြလိုက်တယ်။ သူကTaxiမောင်း တော့… အိမ်အပြန်မပူရဘူးလေ။နေ့တိုင်းတော့မဟုတ်ပေမယ့်….တစ်ပါတ်ကို…လေးငါးရက်လောက်ကြိုတော့… အဆင်ပြေတာပေါ့ ။
ပြီးတော့…အိမ်ကအမေကတော့..သူ့ကိုသဘောကျတယ်။မီမွန်လဲအရမ်းချစ်တယ်… ပထမဆုံးချစ်သူမို့လေ။သူနဲ့ပဲအရာအားလုံးကို သိခွင့်ရခဲ့တာလေ။ဟိုဖက်ရပ်ကွက်ဒီဖက်ရပ်ကွက်ဖြစ်ပေမယ့်….ငယ်ငယ်လေးထဲကအရမ်းသဘောကျခဲ့ရတဲ့အကိုတစ်ယောက်ဆို လဲဟုတ်တယ်။သူကဟိုဖက်ရပ်ကွက် ကဆိုပေမယ့်….ကိုယ့်ဖက်ရပ်ကွက်မှာပဲ… ဂိမ်းလာလာဆော့နေတတ်တာ။ “မောနေပြီလား သဲလေး” “မမောပါဘူး..ဒီနေ့နေ့လည်လောက်ကတည်းက…အခန်းတွေ ရှင်းပြီးသွားတာ” “သြော်…. ကောင်းတာပေါ့…ဘယ်သွားမ လဲ…” “ဘယ်သွားချင်လို့လဲ” “မေးကြည့်တာပါ….ကားမဆွဲတော့ဘူးလေ….နေ့လည်က ပွိုင့်တစ်ခုက ရလာသေးတယ်” “အင်းဒါပေ မယ့်.ခြောက်နာရီလောက်တော့အိမ်ပြန်မယ်နော်” “အိုကေ”
မီမွန်အလုပ်လုပ်တဲ့ဟိုတယ်က…ရွှေဂုံတိုင်ဖက်ကဆိုတော့…နီးနီးနားနားဖြစ်အောင်…အင်းယားလမ်းက ဟိုတယ်တစ်ခုပဲ မောင်း လာလိုက်တယ်။အဲဒီ့မှာက….တစ်ဆက်ရှင်တစ်သောင်းခွဲဆိုတော့..အိုကေပဲ။အခန်းထဲရောက်တော့…ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး… အဝတ် ချွတ်ကာတာဝါတစ်ထည်ပတ်ထားလိုက်တယ်။ ဒီကိုလာနေကျဆိုတော့…အေးဆေးပါပဲ….သူများအတွဲတွေလိုလဲဝင်တာနဲ့… နမ်း ဖက်နေရအောင်လဲ…အငမ်းမရမဟုတ်တော့အေးဆေးပါပဲ။တစ်ခုတော့ရှိတယ်…မီမွန့်ရဲ့ညီမလေးကိုတော့… ရေမဆေးထားဘူး။ဒါ ကတော့…နောက်ဆိုဘာလဲ သိရမှာပေါ့နော်…ခနတော့စောင့်။ညီမလေးကိုငုံ့ကြည့်လိုက်တော့… အမွှေးလေးတွေတောင်… ထိုးထိုးထောင်ထောင်ငုတ်စိလေးတွေတောင်ဖြစ်နေပြီ….
ကုတင်ပေါ်ရောက်တော့…တီဗီဖက်မှာ..ဝေလင်းကPen.Driveတစ်ချောင်းနဲ့တီဗီမှာအလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ဒီနေ့သူ့ဖုန်းနဲ့ ဒေါင်းထား တာတွေကိုပြမလို့နေမှာ။(Ps: Pen Drive က Opticalနော်…ဆရာကြီးမဟုတ်တဲ့လူတွေအတွက်ရှင်းပြတာပါ) တီဗီမှာပေါ်လာတာ ကHomemadeလေ..အလင်းရောင်က HDမဟုတ်ဘူး။သူကProမဟုတ်တဲ့လူတွေ…သရုပ်ဆောင်တာတွေပဲ… သဘောကျတာ လေ။သူ့ဖုန်းထဲမှာလဲအပြည့်ပဲ။ ဝေလင်းဒီဖက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့…အိချောပိုလိုမျိုး ဘောဒီလိုပုံမျိုးလေးနဲ့… ကုတင်ကို ခြေဆင်းထိုင်ပြီး…တီဗီဖက်ကိုကြည့်နေတဲ့…မီမွန့်ကိုတွေ့လိုက်တော့…
စိတ်ထဲကတော့ပြောလိုက်တယ်။ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရမ်းကံကောင်းတဲ့လူလို့။ခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်လေ… အသက်က၁၉နှစ် ကျော်ကျော်..ရုပ်ကလဲကြည့်ကောင်းတဲ့ဖက်ပါတယ်။ နှစ်ခမ်းထူလေးကနှာဗူးနုတ်ခမ်းလေ….ပြီးတော့ဘော်ဒီကလဲ..နောက်က ကြည့်ရင်၂၅လောက်တော့… ခန့်မှန်းလို့ရအောင်ကြည့်ကောင်းတယ်။နို့တွေကတော့… လက်တစ်ကိုင်စာလောက်ရှိတယ်။တင်ပါး တစ်ခုထဲကားကားလေးနဲ့တင်းတင်းရင်းရင်းလေး…အရမ်းမိုက်တာ… လေးဖက်လေးများကုန်းပေးလိုက်လို့ကတော့…လုံးဝကိုမိုက် တာ။
ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ကံကောင်းတာက…သူ့ရဲ့အပျိုစင်ပန်းလေးကို…ကျွန်တော်အရင်ရခဲ့တာရယ်။လိင်ကိစ္စတွေနဲ့ပက်သက်လာ ရင်… ကျွန်တော်ဘာပြောပြော…ဘာပဲတောင်းဆိုဆို…ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတတ်တာပဲ။သူကမပါစိတ်ပါလက်ပါနဲ့လေ။ ဒေါက်ဒေါက်..ဒေါက်…… ဝေမင်းကမီမွန့်ကို…မျက်စပြစ်ပြလိုက်တယ်။မီမွန်ကဝေလင်းမျက်စပြစ်တာကို..အထာသိတော့… ချစ်စ ဖွယ်မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့..ပေါင်ရင်းနီးပါးထိရောက်နေတဲ့…ပတ်ထားတဲ့ ဘတ်ကို..အပေါ်ထိနည်းနည်းတင်းအောင်ဆွဲပြီး တော့… အပေါ်ပိုင်းကိုတော့…သဘတ်နည်းနည်းချောင်သွားအောင် ရင်ညွှန့်ထဲလက်ချောင်းလေးထည့်ပြီး..လှုပ်လိုက်တော့သ ဘတ်နည်းနည်းပြေသွားတယ်။
တင်ပါးအပြည့်ထိုင်ထားပြီးနောက်ကိုလှန်ချလိုက်တယ်။ပေါင်နှစ်ချောင်းကို..နည်းနည်းကားလိုက်တယ်…..လက်ကိုခေါင်းအောက် ထိုးထည့်လိုက်ကာ… ခုတင်ခြေရင်းမှာပက်လက်လှန်ပြီးတော့..တီဗီကြည့်နေတဲ့..ဆက်စီကျကျပေါင်လုံးလှလှကောင်မလေးတစ် ယောက်အဖြစ်… တံခါးမဖွင့်ခင်…စက္ကန့်ပိုင်းလောက်အတွင်းမှာ လုပ်ပလိုက်တာ။ တံခါးဖွင့်လိုက်တော့… ဝိတ်တာကောင်လေးဝင် လာပြီး….မျက်လုံးတွေက..မီမွန့်ဆီမှာပဲဆိုတာသိနေတယ်….ဘယ်ယောက်ကျားမှ…ဒီဘော်ဒီ ဒီပို့စ်နဲ့ကတော့ နှစ်ယောက်ထဲကဆို ရင် အတင်းကျင့်ခံရမှာ။မီမွန်လဲ…ကြည့်နေမှန်းသိတော့မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး… တီဗီထဲမှာအာရုံရောက်နေသလို..လုပ်နေလိုက် တယ်။
အခန်းထဲမှာလဲ…ယောက်ကျားကဖုန်းတစ်လုံးကိုင်ပြီးVDO ရိုက်နေတာ…နောက်တစ်ယောက်ကကောင်မလေးကို…မျက်နှာဖုံးစွပ် ပြီး ဗျင်းနေတာ။ဝေမင်းကတော့မသိသလိုနဲ့… ဖုန်းကြည့်ပြီးတော့…ဝိတ်တာလေးလာပို့တဲ့Blcakshield ကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။ “တစ်ခါတည်းရှင်းပေးရမှာလား…” “ရတယ် အကို Check out ထွက်မှ ရှင်းလဲ ရတယ်” ဝိတ်တာကောင်လေးထွက်သွားတော့…… ဝေမင်းလဲပက်လက်လေးဖြစ်နေတဲ့…မီမွန့်ရဲ့ပေါင်ကြားကို…မျက်နှာလေးအပ်ပြီး မြတ်မြတ်နိုးနိုး နမ်းလိုက်တယ်။ “အနံ့တစ်မျိုးရ နေတယ် သဲ” ခစ်….ဆိုပြီး…မီမွန်…ရီလိုက်ပြီး…ထထိုင်ပြီးတော့…ဝေမင်းကိုဆွဲထူပြီး… “လာကုတင်ပေါ်တက် အေးဆေးပြောပြ မယ်” ဝေမင်းစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားလိုက်တော့…လီးကတင်းလာတယ်။စိတ်ဆိုးသွားတာမဟုတ်ဘူး… စိတ်ထလာတာ။ကုတင်ပေါ် မှာ..ဝေမင်းကိုပက်လက်လှန်ပြီး…မီမွန်ကဝေမင်းမျက်နှာကို ခွထိုင်လိုက်တယ်။ “ကို..သေချာ အနံ့ခံကြည့်” “အင်း…” “မလျက်နဲ့ နော်” “အွန်း” “ကို…သေချာရှုလို့ရအောင်လို့ရေတောင်မဆေးဘူး..ရှူရှူးပေါက်ပြီးတာတောင်..တစ်ရှူးလေးနဲ့ပဲ သုတ်တာ”
“ဝေမင်းလဲ…….ဘောင်းဘီကိုစမ်းချွတ်လိုက်တယ်” “ကို…….ကိုညီနေ့လည်ကလုပ်သွားတာ….ကိုရတဲ့အနံ့ကသူ့လီးနံ့ နံလား” “အင်း.လရည်တွေကိုထုတ်သွားသေးလား….ကွိုင်နဲ့လား” “No..သူ့လရည်တွေက သဲတင်ပါးမှာ…ပန်းထုတ်သွားတာ…ကို ရှုကြည့်” မီမွန်ကိုမှောက်ခုံဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး…တင်ပါးတွေကို..ဝေမင်းတစ်ယောက်မက်မက်မောမောရှုကြည့်တယ်။မီမွန့်ရဲ့ပိပိကိုလည်း… တင်သားနှစ်ဖက်ကိုဖြဲပြီး…သေချာရှုကြည့်နမ်းကြည့်လုပ်တယ်။ “သဲ ကိုယ်မရတော့ဘူး” “အင်း…ကို့ဟာကို…သဲထဲကိုထည့်ထား… သဲဒီပုံစံနဲ့ပဲ….ပြောမယ်မျက်နှာပူလို့” ဝေမင်းကမီမွန့်တင်ပါးကိုအားနဲ့ညှစ်လိုက်တယ်….ပြီးတော့မှောက်ခုံလေးဖြစ်နေတဲ့… မီမွန့် တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုဖြဲပြီး…အရည်ကြည်တွေစို့နေတဲ့…အရေးပြားဖုံးနေတဲ့ညီလေးကို… တွင်းဝကို ချိန်ပြီး ထိုးထည့်လိုက်တယ်။
“အား..ကောင်းလိုက်တာအထဲမှာနွေးနေတာပဲ” “သဲလဲ ကောင်းတယ်…..သဲပြောမယ်” “အင်းး” “မလုပ်နဲ့ဦးနော်..” ဝေမင်း… မှောက်ခုံထပ်ရက်သားလေးနဲ့…မီမွန့်ရဲ့ဂုတ်သားတွေကိုနမ်းလိုက်တယ်…လက်တွေကိုမီမွန့်ချိုင်းအောက်ကိုနှိုက်ပြီးသိုင်းဖက်လိုက် တယ်။ “ကို” “အင်း” “ကိုခိုင်းလို့…သူ့ကိုလက်ခံတယ်ပြောပြီး…ဒီကြားထဲလစ်ရင် လစ်သလို…လာနမ်းလိုက်ဖက်လိုက်လုပ်တာ..သိ တယ်နော်” “အင်းသူကကော..ကိုယ်လုံးဝမသိဘူးလို့ ထင်နေတာမလား” “အင်းပေါ့..သူ့မှာလဲမိန်းမရှိတာပဲ..သူဘယ်သူမှလျှောက် ပြောလို့မှမရတာ… ပြောရင်..သူပဲပြသာနာတက်မှာလေ…” “အင်းပေါ့…ကိုတို့တွက်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲပေါ့နော်” “ဟုတ်တယ်… နားထောင်… နေ့လည်က..သဲနောက်ဆုံးကျန်တဲ့checkoutခန်းရှင်းမယ်လုပ်တော့…အခန်းထဲမှာ… ပန်းကန်တွေတွေ့ လို့RoomServiceကိုဖုန်းဆက်တော့…သူနဲ့တိုးတာလေ…” သူက…သူလာခဲ့မယ်ပြောတော့…သဲက သူအဲလောက် လုပ်မယ်လို့ဘယ် ထင်မှာလဲ…. ပြီးတော့..သူကမလာခင်ထဲက သူများတွေ…ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကြည့်လာတာ…ပိုင်ပြီဆိုမှ သဲကိုလုပ်တာ… “အင်း” ဝေမင်းလဲ…စိမ်ထားတဲ့တွင်းထဲမှာ…ငပဲကတော်တော်တင်းနေပြီ။
“အဲဒါကိုညီလဲရောက်လာတော့..အခန်းကိုလော့ချလိုက်တယ်သဲလည်းလန့်သွားတာပေါ့..သဲတို့ကအခန်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်… တံခါးပိတ်လို့မှမရတာ..” “ကိုညီဘာလုပ်တာလဲ..တံခါးဖွင့်လို့ပြောတော.” “မီမွန်ဘာမှမပူနဲ့…Incharge တွေမရှိဘူး…ဒီ အခန်းCheck outလုပ်တာလဲ…Receptionကလဲချက်ချင်းမသွင်းဘူးသိလား…” (ဟုတ်တော့လဲဟုတ်သည်…မီမွန်လည်းအခန်းရှင်း တာ ပြီးသလောက်ဖြစ်နေတာ…အခန်းက..မနက်၁၀နာရီလောက်ဝင်ပြီး…လုပ်ပြီးထမင်းစားပြန်သွားတာ။အိပ်ယာခင်းတောင် မ တွန့်ဘူး..အောက်နားလေးပဲ ….နည်းနည်းဆွဲဆန့်လိုက်တာ လုပ်နေကျလေ….DayUseတွေက..အခန်းသိပ်မသုံးလို့ဂျာကြီးက… မ လိုအပ်ရင်ဆွဲဆန့်လို့မှာသွားတာ…ရေချိုးခန်းကတော့ ရှင်းပြီးသွားပြီ)
“အိပ်ယာခင်းကို….ကုန်းပြီးဆွဲဆန့်တုန်းနောက်ကနေလေ… ကိုညီကမီမွန့်ကိုအတင်းဖက်ပြီး…နို့တွေကို ညှစ်တာ…..သိလား ကို” “ဒ င်းဆက်ပြော မရပ်နဲ့” “သဲကိုပေါင်ကြားကိုစမ်းတော့…သဲလည်းအတင်းရုန်းတာပဲ ကိုညီက အရမ်းသန်တယ်…” “မီမွန်ရယ်တဲ့ နင် က နင့်ဘဲနဲ့လုပ်ဖူးနေတာပဲ.ငါလုပ်ချင်တယ်” လို့ပြောတော့ “သဲလည်း… မရပါဘူးပြောသေးတယ်” “သူကအတင်းကြီး..လက်က လဲမြန်တယ်…သဲဘောင်းဘီကို…ချိတ်ဖြုတ်တာမြန်မှမြန်… ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်တာ….ပြီးသဲကိုတွန်းလိုက်တော့…ခုကိုနဲ့နေ သလို….ဖြစ်နေတာပေါ့ ” “သဲကထလို့မရတော့ဘူး…..သူလဲဘောင်းဘီချွတ်ပြီး…….တစ်ခါတည်း ထိုးထည့်တာပဲ” “အား..ကိုညီ ဖြည်းဖြည်း….” “ကောင်းလိုက်တာ.. မီမွန်ရယ်” “နင်အရမ်းမအော်နဲ့နော်….လို့ပြောတယ်…ကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေ… အလုပ်ချိန်မှာ အလုပ်ခံရတာ..အသံထွက်လို့ရမလား” ဝေမင်း…မနေနိုင်တော့ဘူး….နောက်ကနေမီမွန်ကို…ဖြည်းဖြည်းချင်းဖိပြီး စလုပ်နေပြီ။ “ကိုညီ နဲ့လုပ်တော့ ကောင်းလား”
“ကိုကတော့လေ…မကောင်းနေမလား။သဲဟာလေးကကျပ်နေတာ…သူ့ခမျာအသက်တောင် မရှုနိုင်ဘူး….ဒါတောင် အိမ်ထောင်ရှိ လို့” “အေးပါ…ကိုကစတာပါ…ငါ့သဲလေးအရမ်းကောင်းပြီး ကျပ်နေတာ..ကိုအသိဆုံးလေ….ဆက်ပြော” “အင်းအဲထိပဲလေ… သူ လဲမြန်မြန်လုပ်ပြီး…သဲတင်ပါးပေါ်မှာ အရည်ထွက်ပြီး….မြန်မြန်ပြန်ထွက်ရတာပေါ့…” “သဲကိုလုပ်တာ ကောင်းလား..” “အင်း ကောင်းတယ်…ကြောက်တာလဲပါတယ်….ခိုးစားသလို ဖြစ်တော့…ပိုကောင်းတယ်..” “သဲကိုပြီးလိုက်တော့မယ်နော်…” “အင်း…..ပြီးချင်ရင် ပြီးလိုက်တော့…..” ဝေမင်းအားရပါးရဆောင့်ချပြီးတော့… အရည်တွေအထဲပန်းထည့်လိုက်တယ်။မီမွန် လဲ….အရည်တွေအထဲဝင်လာတော့.. တစ်ခါပြီးသွားတယ်။အရည်တွေကအများကြီးလေ။
အဲနေ့ကတော့နှစ်ယောက်သား…အိမ်စောစောပြန်ရမယ်ဆိုတာနဲ့…တစ်ခေါက်ပဲလုပ်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်လေ တစ်ခေါက် ဆိုတာလဲ..ကျေနပ်မှုအပြည့်ရတယ်။မီမွန်လည်း..အဲ့အရသာကိုကြိုက်တယ်။နှစ်ယောက်လုံးကြိုက်တာပါပဲ….စိတ်တူကိုယ်တူ ချစ်သူတွေလေ။ ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့… ဝေမင်းနဲ့မီမွန်နဲ့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာအကြောင်းရယ်မှတော့မဟုတ်ဘူး။ ဝေမင်းကို…သူ့အိမ်ကသင်္ဘောတက်ခိုင်းတာနဲ့ဝေမင်းက… မီမွန်နဲ့လက်ထပ်ပရစေဆိုတော့….နှစ်ဖက်မိဘလက်ခံတာနဲ့လက်ထပ် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
လက်ထပ်တယ်ဆိုပေမယ့်လဲ…ဟန်းနီးမွန်းထွက်ပြီးတော့… သူ့အိမ်ကိုယ့်အိမ်တစ်လှည့်စီနေဖြစ်ကြတာပေါ့။Taxiကရတဲ့ ပိုက်ဆံ က… ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။လက်ထပ်ပြီး…၃လလောက်ရှိမလားမသိ။ဝေမင်းလည်းဟိုက ခေါ်တာနဲ့ထွက်သွား တာပါပဲ။ဝေမင်းအိမ်က…ဝေမင်းအခန်းမှာတော့ မီမွန် သိပ်မနေဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုယ်နေဖြစ်တာ… တစ်ခါတစ်လေလှမ်း ခေါ်ရင်တော့၁ညမျိုး၂ညမျိုးသွားအိပ်ရတယ်။သူ့အိမ်က..အေးဆေးပါပဲ။ဝေမင်းအကို… ကိုအောင်ထွန်းဆိုတဲ့တစ်ယောက်.. မူးမ လာရင်တော့အေးဆေးပါပဲ။သူကအမြဲတမ်းတော့…မသောက်ပါဘူး။ပြီးတော့သူက… သင်္ဘောတက်ဖို့လုပ်တော့ဆေးကျတယ်ဆို လို့..အိမ်မှာပဲနေတာ။
အိမ်ကလဲအရက်သောက်တာ…မကြိုက်ပေမယ့်..တစ်ဖက်မှာကလဲ..သားကြီးကမြေးဦးဆိုတော့… အဖိုးအဖွားတွေက..မနေတော့မ နိုင်လို့လွှတ်ထားရတာပေါ့…… မီမွန်လဲအလုပ်မှာ…ကိုညီနဲ့မကောင်းတာတွေမလုပ်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။လူမလစ်တာလဲပါတာပေါ့။ ပြီးတော့… ဟိုတယ်ကလဲနောက်တစ်လုံးဆောက်နေတော့….ကိုညီလဲအဲဖက်မှာကျနေတာများတယ်။လက်ထပ်ပြီးတော့…သူလဲ နည်းနည်းတော့ ရှောင်ပါတယ်။.မီမွန်လဲ…လက်ထပ်ပြီးခါစကတော့…ပျော်လဲပျော်… ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ပဲဆိုတော့..ဘာအကြောင်းနဲ့မှ မဟုတ်ပဲနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲနေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်…ပြောင်းလဲလာတာကတော့ဂျာကြီးပဲ… ကိုမိုက်ကယ်ပဲဆိုပါတော့… နိုင်ငံခြားသားတွေခေါ်ရလွယ်အောင်…မိုက်ကယ်လို့ပေးရင်းနဲ့…အဲ့နာမည်ပဲလူတွေသိကြတော့တယ်။ မိုက်ကယ်နာမည်ကတော့ကြီး တယ်။မိန်းမကိစ္စနဲ့ပက်သက်လာရင်…ဒါကလဲ…အချင်းချင်းတွေလောက်ပဲသိတာပါ။
တစ်နေ့တော့…မီမွန့်ကိုရုံးခန်းထဲကိုခေါ်ပြီးတော့…အသစ်ဖွင့်မယ့်ဟိုတယ်မှာ…ကြီးကြပ်ရေးမှုးရာထူးနဲ့ပြောင်းရမယ်လို့ခေါ်ပြော တော့… မီမွန် အံသြသွားတယ်။ “ဂျာကြီးကလည်း နောက်နေပြန်ပြီ….” “အေးတကယ်ပြောတာ…ဟိုဖက်ကဟိုတယ်လို့သာပြော တာ… အခန်းက၁၆ခန်းလောက်ပဲပါတာ။..နင်နဲ့အတူHousekeepingကနှစ်ယောက်ပါမယ်.။ “တကယ်ဆိုရင်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်..” “ဒါပေမယ့်…နင်ကျေးဇူးတော့ ဆပ်ရမယ်နော်” “ရှင်” “နောက်မှပါ.” အဲဒီ့အချိန်မှာဂျာကြီး..ကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်တွေ က… မီမွန့်မျက်လုံးထဲကနေ…ရင်ထဲမှာအလိုလိုသိလိုက်တာက….ညီမလေးတောင်ကြုံ့သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။
“ဒါနဲ့ စကားမစပ်…နင့်ယောက်ကျားသွားတာ..ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ….” “နှစ်လလောက် ရှိပြီ ဂျာကြီး…” “အေး နင်လဲ…..ဟာနေရော ပေါ့.” “ဟာဂျာကြီးကလဲအရမ်းနောက်တာပဲ….” ဆိုပြီးရုံးခန်းထဲက… အပြေးလေးထွက်ခဲ့တယ်။ဂျာကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေ ကတော့..တုံခါသွားတဲ့တင်သားတွေကို…မျက်တောင်မခတ်ပဲငေးလို့ရယ် ဒီလိုနဲ့အသစ်ပြောင်းပြီး…အလုပ်လုပ်ရတဲ့ဟိုတယ်ကျ တော့… ရုံးခန်းအသေးလေးတစ်ခုပါတယ်။တခြားဝန်ထမ်းတွတော့မရှိပါဘူး။HKကမီမွန်ရယ်…ကောင်လေးတစ်ယောက်… ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရယ်ဆိုတော့…အဆင်ပြေပါတယ်။ပြီးတော့….ဂျာကြီးလာရင်ထိုင်ဖို့ရယ်Guestတွေလာရင်တော့… ဟို ဘက်ဟိုတယ်ကလာပို့တဲ့ဝန်ထမ်းတော့ပါလာတောပေါ့။
ဒီလိုနဲ့တစ်ရက်ပေါ့လေ…မီမွန်လဲအရင်ကလောက်…မပင်ပန်းတော့ပဲအလုပ်လုပ်ရတာရယ်… ယောက်ကျားကလဲအဝေးရောက်နေ တော့..လူကလဲငယ်..စိတ်ကလဲကြွ…ယောက်ကျားကလဲခွင့်ပြုထားဆိုတော့… တစ်ခါတစ်လေဆိုစိတ်က.. လိင်ကိစ္စပဲရောက်နေ တာပေ့ါ။ ဝေမင်းခမျာလဲ…သူ့မိန်းမလေးကိုစိတ်မချရှာတော့….မသိတဲ့လူတွေနဲ့… သူမရှိတုန်းဖြစ်လို့…သူများတွေသိသွားမှာရယ် စိတ်ချရတဲ့လူဆိုလုပ်…..ပြီးရင်သူ့ဆီကိုမီမွန့်မျက်နှာမပါတဲ့…. VDO ဖိုင်ပို့ပေးရမယ်ဆိုပြီး…ခွင့်ပြုထားတာဆိုတော့… မီမွန့် အကြိုက်ပေါ့။ ပြီးတော့သူ့ယောက်ကျားကိုလဲ…..ပျော်ရွှင်စေချင်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ….နှစ်ယောက်လုံးပျော်ပြီး…ခိုင်မြဲသွား မယ့်.. ခြေလှမ်းမျိုးပဲလှမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။တစ်ရက်တော့… စိတ်တွေကတအားထနေတာနဲ့Viberကနေ….ဝေမင်းဆီကို မက်ဆေ့ပို့လိုက်တယ်။
“ကို…ဒီနေ့မီမွန်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်မသိဘူး လိုနေတယ်…” “ခနနေတော့….စာပြန်လာတယ်…ကိုညီရှိလားမေးတော့” “မသိဘူး…” “စည်းကမ်းအတိုင်းနော်…လုပ်ဖြစ်ရင် ” “အင်းပါ ကိုရယ်.” နောက်တော့….မီမွန်လဲကိုညီဆီကို… ဖုန်းဆက်တော့ချက်ချင်းမ ကိုင်ဘူး။ခနနေတော့ ပြန်ခေါ်တော့ “ကိုညီ ဟိုတယ် အသစ်ဖက်ကို မလာဘူးလား” “ကိစ္စမပေါ်သေးဘူးဟ… လွှတ်မှလာလို့ရမှာ” “”ဒါပေမယ့်.ဂျာကြီးနင်တို့ဖက်ကို လာစစ်မယ်ပြောနေတယ်” “တကယ်လား” “အေး” “ဒါဆို ဒါပဲ အားရင် လာခဲ့ဦး” “အေးပါ” ဂျာ ကြီးလာမယ်ဆိုတော့…အောက်ကနှစ်ယောက်ကို… သက်ဆိုင်ရာအထပ်တွေမှာDeepCleaningလုပ်ဖို့ပြောပြီးစာရင်းဇယားတွေ ပြင်ထားလိုက်တယ်။တော်သေးတယ်…
ကိုညီဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်တာ…တော်ကြာတစ်ခုခုအမှားတွေ့သွားရင်…လာမှ..ကိုယ်က အလုပ်လုပ်ရဲ့သားနဲ့ အပြစ်ပြောခံနေရမှာ.. လာမယ့်လာတော့လည်း…မီမွန့်ဆီကိုတန်းလာတာပါပဲ။အလုပ်ကိစ္စကနည်းနည်း… မီမွန့် ကိုဏှာကြည့်ကြည့်တာကများများ..မီမွန်ကလည်း…စိတ်ကတစ်မျိုးဆိုတော့….အဲ့မှာစတွေ့တာပေါ့…. စကားပြောနေရင်းနဲ့…….ဂျာ ကြီးကကေတီဗီရောက်ဖူးလားမေးတော့… မရောက်ဖူးဘူးဂျာကြီးဆိုတော့…..ညနေငါလိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီး..ဖြစ်လေရော…..စား နေကျကြောင်ပါးကြီးဆိုတော့..အနေအထားကိုကြည့် တာနဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်တာနဲ့…နည်းနည်းတော့သဘောပေါက်တယ်.။အဲ ဒါနဲ့..ဂျာကြီးရှေ့မှာပဲ……ဝေမင်းကို ဖုန်းခေါ်လိုက်တယ် ။
(ဝေမင်းက..သင်္ဘောတက်တယ်ဆိုပေမယ့်…ကာတာက ဆိပ်ကမ်းမှာပဲအထိုင်ချရတာပါ.Internetကလဲရဆိုတော့) ကံများကောင်း ချင်တော့…ဖုန်းက်ုတစ်ခါတည်းတန်းကိုင်တာပဲ… ကိုရေ….ဒီမှာဂျာကြီးကမီမွန့်ကို….ကေတီဗီလိုက်ပို့မလို့တဲ့… (ဂျာကြီးကိုကြည့် တော့…ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတာ….ဖန်ပါတယ်ဆိုမှ…သူ့ယောက်ကျားကိုလှမ်းပြီး… သံတော်ဦးတင်ရတယ်လို့ထပြီးသွားမလို့ရှိ သေး…မီမွန်ကမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြီး…လက်ကာပြတယ် ခဏစောင့်ပေါ့ဆိုပြီးပေါ့) ဝေမင်း ။ ။ ”မီမွန်တစ်ယောက်တည်းလား..” မီ မွန် ။ ။ ”ဟုတ်တယ်ကို အလုပ်ကလူတွေပါတယ်…” ဝေမင်း ။”ဂွင်တွေ့ပြီးပေါ့….နောက်ကျရင်… အိမ်မပြန်နဲ့တော့ တစ်ခါတည်း လုပ်ပလိုက်တော့” မီမွန် ။ ။ ”ဂျာကြီးလည်းပါတယ်..” ဝေမင်း ။ ။” ရီကော့ ယူခဲ့” မီမွန် ။
။ ”ဟုတ် ဒါပဲနော်…” မီမွန်ကဂျာကြီးဖက် လှည့်လိုက်တော့.”အလုပ်က…ဘယ်သူမှ မပါဘူးလေ..” “ဂျာကြီးကလဲ အဲလိုပြောလို့ဖြစ်မလား” အချိန်တွေက…တစ်ရွေ့ရွေ့နဲ့ ကုန်ဆုံးလို့လာပါတယ်။အရင်တုန်းကလိုတော့… ဖြစ်တော့ပါဘူး။သိပ်မကြောက်တတ်တာလဲပါတယ်။အိမ်ကိုတော့ဖုန်းဆက်ပြော လိုက်ပါတယ်။အိမ်ကတော့…ဟိုတယ်မှာစလုပ်ကထဲကဆိုတော့…ပြသနာမရှိဘူး။ တကယ်တော့မီမွန်ကကလပ်သွားချင်တာ။ တစ်ခါမှမရောက်ဖူးလို့…ဒါပေမယ့်… လူတွေမြင်မှာလဲကြောက်တယ်။အခုလို..ညဖက်ကိုသွားမယ့်ကိစ္စမျိူးတောင်….လုပ်မယ်ဆို ပြီးတစ်ခါတည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။တစ်ခါတ စ်လေတောင်…အားတွေ ဘယ်လိုရှိလာမှန်းမသိဘူး…မိုက်ရူးရဲမိတာများလားမသိပါ ဘူး။ ညနေကျတော့… အချိန်းအချက်လုပ်ထားတဲ့အတိုင်း…ဟိုတယ်ရဲ့၅မှတ်တိုင်ကျော်လောက်မှာစောင့်ပြီးတော့… ဂျာကြီးကားနဲ့ လာခေါ်တော့လိုက်သွားတယ်။ကားပေါရောက်တော့..ဂျာကြီးကဦးထုတ်တစ်လုံးပေးတယ်။မီမွန်လဲ..ဂျာကြီးရဲ့အကွက်ကျမှု ကိုတွေ့ တော့…တော်တော်ကျေနပ်သွားတယ်။
အစစအရာရာစဉ်းစားတတ်လို့လဲ…ဂျာကြီးဖြစ်နေတာလေ။ ဆံပင်ကိုဖါးလျားချပြီး…ဦးထုတ်ဆောင်းလိုက်တော့… တော်ရုံဆို မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုနဲ့တောင်ဥက္ကလာဖက်ကို..ရောက်လာကြတော့…ဆိုင်နံမည်ကိုတော့မသိပါဘူး။ ဆိုင်ကခြံထဲမှာဖွင့်ထား တယ်။လူကလဲသိပ်မရှုပ်ဘူး..ကြည့်ရတာ…အသန့်တွေပဲလာကြတာထင်တယ်။လွယ်အိတ်ကိုတော့… ကားထဲမှာထားခဲ့ပြီး…ဂျာ ကြီးနောက်ကိုပဲလိုက်လာခဲ့တယ်။အထဲမှာလဲသူ့ကိစ္စနဲ့သူတွေပါ..ဘယ်သူ့မှလဲကြည့်မနေဘူး။
အနောက်ဖက်ကိုလျှောက်သွား တော့…လှေကားလေးရှိတယ်။နှစ်ထပ်အဆောက်အဦးအပေါ်တက်ဖို့ဆိုပြီး…အဲကနေ တက်လာတော့ …. ဝိတ်တာကောင်လေး က….”အကိုအခန်းယူမှာလားဆိုတော့” “ယူပြီးသား.အဲလက်စ်တို့ယူထားတဲ့အခန်းလိုက်ပို့ဆိုတော့’ “ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီး”ထောင့်ကျကျ အခန်းဖက်ဆီကို..လျှောက်သွားရတယ် အထဲကသီချင်းသံကတော့DJအသံနဲ့… တံခါးခေါက်လိုက်တယ်။.ခနနေတော့…အထဲကနေ လော့ကိုဖြုတ်လိုက်သံကြားရတယ်။မိုက်တယ် ကိုယ်ပိုင် အခန်းလိုပေါ့…… အထဲဝင်တော့…စားစရာအပြည့်နဲ့သောက်စရာတွေ ကို..အခန်းအပြင်က…အလင်းရောင်နဲ့မြင်လိုက်ရတယ်။တံခါးလာဖွင့်တာက… ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့လူတစ်ယောက်… အခန်းထဲမှာက…ကောင်မလေးတစ်ယောက်..မီမွန်တို့အရွယ်လောက်ပဲ….လှတယ်။
“အေးငါစောင့်နေတာ နှစ်နာရီလောက် ရှိပြီ” အဲ့အချိန်မှာအခန်းထဲက…အနံတစ်မျိုးရတယ်။မီမွန်သိလိုက်တာကတော့… အထဲက နှစ်ယောက်..အလုပ်တော့ဖြစ်ထားတယ်ဆိုတာပဲ။အသေးစိတ်တော့..မရေးတော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ကေတီဗီသာဆိုတယ်….ကု တင်လိုထိုင်ခုံပါတယ်……ရေချိုးခန်းအိမ်သာလဲပါတယ်။စောင်မပါတာတစ်ခုပဲ… ခေါင်းအုံးအသေးလေးတွေက…မှီဖို့ပေးထားတယ် ဆိုပေမယ့်…အိပ်လို့ရပါတယ်။ နောက်တော့… တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မိတ်ဆက်ပြီတော့…သောက်ကြတာပေါ့။နောက်တစ်နာရီ လောက်နေတော့… သူတို့ပြန်သွားရတယ်။ကောင်မလေးက..အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့…. ဂျာကြီးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တော့… ဂျာ ကြီးကရီမုဒ်ကိုကိုင်ပြီးပြောင်းလိုက်တော့…ရုပ်ရှင်ဖက်ကို….ပြီးတော့ အသံကို အကျယ်ကြီးမဟုတ်ပဲ…..နည်းနည်းလျှော့လိုက် တယ်။
“ဂျာကြီးဒီနေရာက…ဘယ်လိုနေရာကြီးလဲ” “အင်း…ဒီနေရာကဆက်ရှင်နဲ့ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူး..ဟိုတယ်လိုပဲ ယူရင်တစ်ရက်လုံးယူရ တာ… ဈေးကလဲ ကြီးတယ် သီချင်းဆိုလဲရတယ်.. ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်လဲ ရတယ်…. ညကိုးနာရီလောက်ကျရင် စောင်တွေ လာပေး မယ်ပေါ့…” မီမွန်လဲငြိမ်သွားတယ်.(စိတ်ထဲကလဲ.သူနဲ့ကိုယ်နဲ့က အလုပ်မှာဆိုရင်လဲ…အဲလိုဆက်ဆံရေးမျိုးလဲမဟုတ်ဘူး။ ပြီး တော့… ကေတီဗီသွားမယ်ဆိုပြီးခေါ်လာတယ်…ပြီးတော့ ဟိုတယ်လိုအခန်း….ကိုယ်ကလဲမသိရင်ကြေးစားတစ်ယောက်လို… ဘာ မှန်းညာမှန်းမသိလိုက်လာတယ်။သေချာတာကတော့…ဒီညလုပ်ဖြစ်ကြမယ်။သူကဘယ်လိုစမှာလဲ…ပြီးတော့ ဘယ်လို လုပ်ကြမှာ လဲဆိုပြီး..တွေးနေမိတယ်….) တကယ်တော့အချိန်က… အဖြေပေးသွားပါတယ်။ဂျာကြီးပေးတဲ့ခွက်ကိုယူပြီးသောက်ကြတယ်။ ရုပ်ရှင်ကားကလဲ….CaptailPhilipသုံးလေးခွက်လောက်ကုန် တော့…နည်းနည်းလေး သွေးပူလာတယ်။
“ဒေါက်ဒေါက်” တံခါးခေါက်သံနဲ့ဖုန်းကနာရီကိုကြည့်လိုက်မိတော့…၉နာရီထိုးနေပြီ။ဂျာကြီးကတံခါးဖွင့်ပြီး… စောင်နှစ်ထည်ကိုလှမ်းယူတယ်။ပြီးတော့..အော်ဒါထပ်မှာတယ်ထင်တယ်။ခဏနေတော့…… ကောင်လေးက ဘီယာပုလင်းတွေ လာပို့တယ်။ စားပွဲပေါ်မှာ..ပုလင်းကတော့နည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်။ အမြည်းတွေကတော့ကျန်သေးတယ်။ဘာမှာဦးမလဲဆိုတော့ …ခေါင်းပဲခါပြလိုက်တယ်။ဝိတ်တာကောင်လေးထွက်သွားတော့…ဂျာကြီးကတံခါးကိုလော့ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့… မီမွန့်ဘေးနားမှာထိုင်ချကာ…တစ်ခါတည်းဖက်ပြီးမီမွန့်နှုတ်ခမ်းတွေကိုလာနမ်းတယ်။
မီမွန်တို့…အငမ်းမရ နမ်းကြတယ်…..ဂျာကြီးကော..မီမွန်ပါ ခနနေတော့…….နှစ်ယောက်သားအဝတ်အစားတွေ….မရှိတော့ပါဘူး။ “ဂျာကြီး” မီမွန့်ရဲ့ဖုန်းကို… ကင်မရာဖွင့်ပြီးလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ဗီဒီယို ရိုက်ပေးဆိုပြီးတော့……ဂျာကြီးရဲ့ ကြီးမားပြီးကော့နေတဲ့ လီးကိုစုပ်ပေးတယ်။ဂျာကြီးလဲ… ကြာကြာမခံနိုင်ဘူး။မီမွန့်ကလှတော့….စိတ်တွေကြွပြီး… မီမွန့်ပါးစပ်ထဲမှာပြီးသွားတယ်။ကင်မရာနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာကိုပြန်ကြည့်တော့…..ဘာလုပ်မလို့သူများတွေမြင်ဦးမယ်..ဆိုတော့မီမွန့် ယောက်ကျားဆီပို့မလို့ဆိုတော့… ဂျာကြီးကပြာကရာ ဖြစ်သွားတယ်…..”သေပြီပေါ့…”
မီမွန်က…တစ်ခွန်းတည်း ပြောလိုက်တယ်။ “ဂျာကြီးရယ်စိတ်မပူပါနဲ့…မီမွန့်ယောက်ျားက…အဲလို မီမွန့်သူများနဲ့လိုတာမြင်မှဖီးလာတာ…သူကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုထားတာဆိုတော့…” သက်ပြင်းချပြီး…”တော်သေးတာပေါ့…ငါကလန့်သွားတာ….နင့်ယောက်ကျားက ကွတ်ကိုး ပေါ့” မီမွန်ခေါင့်ငြိမ့်လိုက်တယ်… နောက်တော့..ဂျာကြီးကမီမွန့်ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး…..ဘာဂျာကိုင်ပေးတော့ကောင်းလိုက်တာဆိုတာလေ….ဂျာကြီးကလဲ… ဂျာကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ…အမှုတ်ကလဲ…သိပ်ကောင်းဆိုတော့.ပုံတောင်နှစ်ပုံလားပဲ..ရိုက်နိုင်တယ်…. ဖီးတက်တယ်ဆိုတာတော့လေ။
ဂျာကြီးလီးဝင်နေတဲ့ပုံ…လေးဖက်ထောက်… နှစ်ပုံလောက်ပဲမှတ်တမ်းယူပြီးတော့….မီမွန့်တို့လိုးကြတာပေါ့။စံချိန်မှီ..ကိုယ့်ယောက်ကျားထက်ကြီးတဲ့လီးက…အဖုတ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ အခါ…..အရမ်းကောင်းတယ်။ဂျာကြီးကတံတွေးတွေ… ခနခနမီမွန့်စောက်ဖုတ်ပေါ်ကိုထွေးချလိုက်….ပြီးရင်လီးထိုးထည့်လိုက်….တစ်ချက်ချင်းလုပ်တယ်။ စိုရွှဲနေတဲ့စောက်ပတ်ထဲဝင်ထွက်သံတွေ…တဏှာသံတွေ…တံတွေးတွေစောက်ရေတွေက… ဖင်ကြားထဲမှာယားကျိကျိဖြစ်နေတာတွေ….အရမ်းကောင်းတယ်။ဂျာကြီးပေါ်တက်ပြီးအပေါ်ကနေမြင်းစီးတော့… ဂျာကြီးကမီမွန့်မျက်နှာလေးကိုကြည့်နေတာ.. “ဂျာကြီးသူများမိန်းမကို လုပ်တာကောင်းလား….” “ကောင်းတယ်.”
“မီမွန်လဲ ကောင်းတယ်” နှစ်ချီလောက်လဲပြီးရော….နှစ်ယောက်သားအိပ်ပျော်သွားကြတာ….နှစ်နာရီလောက်ကြတယ်။အချိန်ကညတစ်နာရီ….ထိုးလောက်မှပြန်နိုး ကြတယ်။သိပ်မအေးတော့တဲ့…….ဘီယာကိုသောက်ကြပြီးတော့…ဂျာကြီးကသူ့လီးကို…မီမွန့်ပါးစပ်နားထိုးပေးလိုက်တယ်။ ဂျာကြီးကိုပုလွေမှုတ်နေတုန်း…..Viberကနေဖုန်းလာတယ်။VDOCallဖွင့်လိုက်တော့……… မီမွန့်မျက်နှာလေးကိုမှုန်မှုန်လေးတွေ့တယ်။ကို..သိပ်မမြင်ရဘူးဆိုတော့……ဂျာကြီးကမီးထဖွင့်တယ်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘာမှမပြောဘူးပဲကြည့်နေကြတယ်။ မီမွန့်က….ကင်မရာကိုဂျာကြီးလီးနားကပ်ပြလိုက်တော့… ဝေမင်းမျက်ခုံးပင့်သွားတယ်။ပါးစပ်ကလဲ…မနည်းပါလားလို့အသံထွက်သွားတယ်။အဲအချိန်မှာဂျာကြီးက… မီမွန့်ကိုမှောက်ခံဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး….အောက်ဖက်ကိုဆွဲလိုက်တော့…ခြေထောက်ကအောက်မှာ…အဲ့အချိန်မှာဂျာကြီးက… မီမွန့်လက်ထဲကဖုန်းကိုလှမ်းယူပြီးတော့……ဘေးနားကနေမြင်ရတဲ့နေရာမှာချိန်လိုက်တယ်။ဝေမင်းကိုလဲ…မြင်ရတယ်…..ဝေမင်းကလဲ အကုန်လုံးမြင်ရတဲ့ View ပေါ့။
ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့မှဂျာကြီးက…မီမွန့်လက်နှစ်ဖက်ကိုယူပြီး…နောက်ပြန်တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုဖြဲခိုင်းတယ်။ဂျာကြီးရဲ့ လက်ဝါးကို… မီမွန့်ပါးစပ်နားကိုတေ့ပြီး…တံတွေးထွေးလိုက်ဆိုတော့….မီမွန်လဲတံတွေးကိုလက်ဝါးပေါ်ထွေးပေးလိုက်တယ်။များများလေးဆိုတော့… မီမွန်လဲသုံးလေးခါလောက်ထွေးပေးလိုက်တယ်။ဂျာကြီးကလက်ဝါးထဲကတံတွေးတွေကို…မီမွန်ဖြဲထားတဲ့… ဖင်ဝမှာကောဖင်မှာကောနှံနေအောင်..လိမ်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့သူ့တံတွေးတွေကို..လက်ဝါးထဲထွေးထည့်ပြီး…… သူ့လီးမှာရွှဲနေအောင်သုတ်လိုက်တယ်။သုံးယောက်သား…..ဘာစကားမှမပြောကြဘူး။
ကိုယ့်အာရုံနဲ့ကိုယ်….ဂျာကြီးကဖုန်းကိုယူပြီး..ကင် မရာကိုအနောက်ကင်မရာပြောင်းတော့…ဝေမင်းမျက်နာကို မြင်ရတယ်။ဝေမင်းက…မီမွန်ရဲ့ ဖြဲထားတဲ့ ဖင်ကြားကိုမြင်ရတယ်။စောက်ဖုတ်ကဖေါင်းကားလို့…ဝေမင်းလီးမှာလဲ..လရည်တွေကစို့လို့လေ။ ဂျာကြီး….ကဒီတစ်ခါထည့်လိုက်တာက …..မီမွန့်ဖင်ဝကို… စစချင်းမဝင်ပေမယ့်….ဂျာကြီးဒစ်က… တစ်ချက်မှာကောက်ပြီးပြန်ဖြောင့်ထားပြီးတစ်ဝက်လောက်ကထိုးဝင်သွားတယ်။မီမွန့်ရဲ့အော်သံကအံကြိတ်ပြီး…..ထွက်လာတယ်။ဆက် မထိုးသေးပဲ…ခနနေတော့မှအဆုံးထိကိုအော်သံကြားထဲကဝင်သွားတယ်။
ဂျာကြီးကမီမွန့်ခေါင်းရင်းမှာလိုးနေရင်းနဲ့ဖုန်းကိုထောင်ထားလိုက်တယ်။ကင်မရာလဲပြန်ချိန်ရင်းနဲ့..ဒီတစ်ခါဝေမင်းဖက်ကမြင်ရတာက တော့…ရှေ့တည့်တည့်မှာ..သူ့မိန်းမမီမွန်နောက်ဖက်မှာက…သူ့မိန်းမကိုလိုးနေတဲ့ ဂျာကြီး … ဖင်ထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်း… ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်…ရှုံမဲ့လိုက်မျက်လုံးစင်းသွားလိုက်နဲ့မီမွန့်မျက်နှာ..နောက်တော့ခက်သွက်သွက်ဆောင့်လာတဲ့… ဆောင့်ချက်တွေ… မျက်လုံးတွေက ဝေမင်းဖက်ကိုကြည့်လိုက်…စင်းကျသွားလိုက်နဲ့… နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျာကြီးရဲ့… သက်ပြင်းချသံနဲ့အတူ..မီမွန့်ပေါ်ကိုမှောက်ကျသွားတယ်။ဝေလင်းရဲ့လက်လဲ…အောက်မှာ လှုပ်ရှားရင်းနဲ့သုတ်ထွက်ကုန်တယ်။မီမွန့်ဖင်ထဲမှာတော့.. ညှစ်ညှစ်ပြီးထုတ်နေတဲ့လရည်တွေက….ဖင်ထဲကိုဝင်လို့.. သုံးယောက်သား… ကာမဆန္ဒတွေပြည့်လို့…အဲဒါကြောင့်ပြောတာ…….”နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထဲမကြည့်နဲ့”သုံးဦးသုံးဖက်ကောင်းတာပါဗျာ…….
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ယောကျြားနဲ့ဝေးနခြေိနျ